Posted by friend group at 10:15 AM0comments
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပါရစေ။ ကျွန်တော်ကတော့ အသက် ၂၃နှစ်ပြည့်တာတောင် ရည်းစားမရှိသေးတဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ့။ ရည်းစား မရသေးတာက မရှာလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ရှာတာမှ ကျွန်တော့်အသက် ၁၆နှစ်ပြည့်ကတည်းက ရည်းစားလိုချင်လို့ လိုက်ရှာနေတာပါ။ အဲဒီနေရာမှာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်က ဂျီးများတယ်ဗျ။ ငယ်ငယ်က ဖွါးဖွါးတို့ ပြောပြထားလို့ မိန်းမတို့၏ ကောင်းခြင်း ငါးဖြာကိုသိနေတယ်လေ။ ဒဲဒီတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရင် ဖွါးဖွါးပြောတဲ့ ကောင်းခြင်းငါးဖြာနဲ့ ပြည့်မပြည့် ချင့်ချိန်ကြည့်နေတော့ ရတာမလို လိုတာမရ ဖြစ်နေရတာပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို မိန်းမတို့၏ ကောင်းခြင်း ငါးဖြာအကြောင်း ကြုံတုန်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ မိန်းမတို့၏ ကောင်းခြင်း ငါးဖြာဆိုတာ ဆံပင်၏ကောင်းခြင်း၊ အသားအရည်၏ ကောင်းခြင်း၊ အရိုး၏ ကောင်းခြင်း၊ အသွေး၏ ကောင်းခြင်း၊ အရွယ်၏ ကောင်းခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ် အကျယ်ဖွင့်လဲ ရှိပါသေးတယ်။ ဆံပင်၏ကောင်းခြင်း ဆိုတာကတော့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ဆံပင်ဟာ ထုံးထားရာမှ ဖြည်လျှော့လိုက်လျှင် ခြေမျက်စိထိ ရှည်လျှားပြီး ဆံပင်ရဲ့ အဖျားဟာကော့လန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရည်၏ ကောင်းခြင်း ဆိုတာကတော့ သီချင်းကလေးတောင် ရှိပါသေးတယ် ရွှေမှုံစားပြီး မွှေးဖွါးသလားလို့ မေးရမလောက် ပါပဲတဲ့။ အရိုး၏ ကောင်းခြင်းကတော့ သွားကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ သူရဲ့သွားလေးတွေဟာ ဖြူဖွေးပြီး ပုလဲလုံးညီ ကြိုးနဲ့သီသို့ ညီညီညာညာ ရှိနေရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသွေး၏ ကောင်းခြင်းကတော့ နှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာ ရဲရဲနီနေရမယ်၊ နောက် သွားဖုံးလေး တွေကလည်း ရဲရဲနီထွေးနေရပါမယ်။ အရွယ်၏ ကောင်းခြင်းကတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့ ဂုဏ်ကိုလည်း ဆိုသလို အသက်အရွယ် တင့်တယ်ခြင်း၊ ကလေးမွေးပြီး သားတောင်မှ အပျိုနဲ့ ခွဲခြားမရလောက်အောင် ပါပဲတဲ့ဗျာ။
အဲဒီတော့ ဖွါးဖွါးပြောတဲ့ ကောင်းခြင်း ငါးဖြာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မိန်းကလေးမျိုး ဘယ်မှာများ ရှာရပါ့မလဲ။ ပထမဦးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ဆံပင်၏ ကောင်းခြင်းနဲ့ပင် လက်လန်သွားရပြီ မဟုတ်လား။ အခုခေတ် ကောင်းမလေးတွေက ဆံပင်ဆိုရင် ဖြတ်လိုက်၊ ဆက်လိုက်၊ ဖြောင့်လိုက်၊ ကောက်လိုက်နဲ့ တခါခါ သူတို့တွေကို မှတ်တောင် မမှတ်မိလောက် ပါပဲဗျာ။ နောက်ပြီး အသွေး၏ ကောင်းချင်းကို ကြည့်ရအောင်ကလဲ နှုတ်ခမ်းနီ အမြဲဆိုးထားတော့ ဘယ်လိုများ ဆုံးဖြတ်ရမလဲ မသိရတော့ဘူး မဟုတ်လား။ လူတိုင်းလူတိုင်း အကောင်းဆုံးကိုပဲ လိုချင်ကြမှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီတော့ လမ်းကြုံလို့ ကောင်းခြင်း ငါးဖြာနဲ့ ပြည့်ဆုံတဲ့ မိန်းကလေးများ တွေ့ခဲ့ရင် လက်တို့ပြီး သတင်းပေးပါလို့......။
Posted by friend group at 4:29 PM0comments
ဘာသာရေးမှာရှိတယ်။ စိတ်ကို အလေ့အကျင့် လုပ်ရာက ရနိုင်တယ်။ တခြားလူတွေကို အကျိုးပြုတာ၊ စိတ်တည်ငြိမ် အေးချမ်းတာတွေက ရနိုင်တယ်။ စိတ်နဲ့ နှလုံးထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ ချမ်းသာသုခကို တွေ့ရတယ်။
Posted by friend group at 4:22 PM 1 comments
ချမ်းသာသုခကြောင့် ဘ၀မှာ နေပျော်နေကြတာ၊ တကယ်လို့သာ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ အပြည့်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘ၀မှာ နေရတာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ လူသားတွေ အနေနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တန်ဖိုးထားမှု ကွာခြားပြီး ရည်မှန်းချက်တွေလည်း ခြားနားကြတယ်။ တချို့ လူတွေက ငွေရရင် ချမ်းသာတယ်လို့ဆိုပြီး ငွေတွေ အများကြီး ရချင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေတွေ အများကြီး ရလာတဲ့အခါ ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။ `ငွေကြောင့် လူတွေ သေရတယ်´ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားအတိုင်းပဲ။ အဲသလိုဆို ဥစ္စာဓနဟာ ဘယ်မှာ ချမ်းသာ စေလို့လဲ။
တချို့ လူတွေက မိသားစုတွေရှိရင် ချမ်းသာတယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် မိသားစုဝင်တွေ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်နေကြရင် ဘယ်မှာ ချမ်းသာ နိုင်မလဲ။ တချို့လူတွေက အချစ်ရှိရင် ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ပြီး အချစ်နောက်ကို အသည်းအသန် လိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အချစ်နဲ့ အမုန်းဆိုတာကလည်း အမြွှာဖြစ်နေလေတော့ အချစ်ဟာ အမုန်းအဖြစ် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်။ ချစ်လေလေ၊ မုန်းလေလေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ချစ်သူတွေ၊ ဇနီး မောင်နှံတွေ ခွာပြဲတဲ့အခါ တစ်ခါတစ်လေကျရင် အဆိုးဆုံး ရန်သူတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်တည်း သံယောဇဉ် မရှိဘဲနေတာက ပိုကောင်းတယ်။
တချို့ကျတော့လည်း သြဇာအာဏာရအောင် ကြိုးစားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အတော်များများက သြဇာ အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ဥပဒေဘောင်ရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ရောက်သွားကြတယ်။ အမြင့်တက်လေ အကျနာလေပဲ။ ရာထူးတွေ၊ သြဇာအာဏာတွေ ဆိုတာကလည်း ချမ်းသာသုခကို အမြဲတမ်း ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေ မဟုတ်ကြဘူး။
တချို့လူတွေက အလုပ်ခွင်မှာ ချမ်းသာမှုကို ရှာကြတယ်။ ဒီနားမှာ စက်ရုံလေးဖွင့်လိုက်၊ ဟိုနားမှာ ကုမ္ပဏီ လေးထောင်လိုက်၊ ပြည်တွင်းမှာ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းကြီး တစ်ခုထောင်လိုက်၊ ပြည်ပမှာ တစ်ခုထောင်လိုက်နဲ့ လုပ်တတ်တယ်။ စာရင်းတွေ၊ လက်ကျန် ရှင်းတမ်းတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်။ ဖောက်သည်တွေ၊ ပစ္စည်းသွင်းသူတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ဗျာများရင်း တာဝန်ကြီးကြီးတွေ ထမ်းနေကြတယ်။ သူတို့က ဆင်းရဲတဲ့ ချမ်းသာသူတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။ ဘယ်မှာလဲ ချမ်းသာသုခ၊ တချို့လူတွေက တောထဲ၊ တောင်ထဲမှာ ချမ်းသာသုခကို ရှာဖွေ ကြတယ်။ သူတို့အတွက် လေပြည်လေညှင်းတွေနဲ့ ပြည့်ပြည့်ဝန်းဝန်း လမင်းကြီးက ချမ်းသာသုခပဲ။ တချို့က ရိုးစင်းတဲ့ ဘ၀မှာ နေကြတယ်။ ရသမျှနဲ့၊ ကျေနပ်ကြ၊ ရောင့်ရဲကြ၊ တင်းတိမ်ကြတယ်။ တချို့က စာအုပ်တွေဖတ်၊ စာသမုဒ္ဒရာထဲမှာ နစ်မြှုပ်ပြီး စိတ်ကိုအခြေချလို့ ဉာဏ်ပညာရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို လိုက်ရှာ ကြတယ်။ ဘ၀မှာ ချမ်းသာသုခကို ရှာဖွေကြတယ်။
ချမ်းသာသုခဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ကြင်နာမှု၊ အနှောင်အဖွဲ့ လွတ်ကင်းမှု၊ ရောင့်ရဲမှုပါပဲ။ တကယ်တော့ ချမ်းသာ သုခကို အပြင်မှာ လိုက်ရှာနေပေမယ့် နှလုံးသားထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ ငှက်တစ်ကောင်ကို ဘာဖြစ်လို့ ကောင်းကင်မှာ ပျံရသလဲမေးရင် ကောင်းကင်မှာ ချမ်းသာသုခရှိလို့ ပေါ့လို့ဖြေမယ်။ ငါးတစ်ကောင်ကို ဘာလို့ ရေကူးနေရသလဲလို့မေးရင် ရေထဲမှာ ချမ်းသာသုခရှိလို့ ပေါ့လို့ဖြေမယ်။ လူတွေက ဘာလို့ ဟိုပြေးဒီပြေး လုပ်နေကြသလဲလို့မေးရင် လောကကြီးထဲမှာ အဆက်အသွယ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရအောင်လုပ်ရင်း လူ့ အဖွဲ့အစည်းကို အကျိုးပြုရင်းနဲ့ ချမ်းသာသုခကို ရနိုင်လို့လို့ ဖြေမယ်။
Posted by friend group at 3:34 PM0comments
လ မျက်နှာ ရှု့စား
(ကျွန်တော့်အစ်ကိုကြီး စူးချစ်ရဲ့ ကဗျာကို ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကိုကြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ)
Posted by friend group at 8:07 PM0comments
Posted by friend group at 4:48 PM0comments
ဆင်းရဲပို၍ ကြီးပေစွ။ ။
Posted by friend group at 3:23 PM 1 comments
(မေမေဂျယ်လီမှ ပြုလုပ်သော “မိခင်မေတ္တာ” ကဗျာပြိုင်ပွဲတွင် ပထမဆုရ နန္ဒာသိန်း (ဘုတလင်)၏ ကဗျာအား ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
Posted by friend group at 1:49 PM0comments
ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ အလိုအပ်ဆုံးအရာဟာ ဘာလဲလို့မေးရင် မေတ္တာပဲလို့ ကောက်ခါငင်ကာ ဖြေလိုက်ချင်ပါတယ်။ မေတ္တာဟာ အလျားအနံ မရှိပေမဲ့ အသွားအပြန်တော့ ရှိတယ်လို့ ဆိုကြတယ်လေ။ မေတ္တာရဲ့ သဘောဟာ အေးမြခြင်း၊ သူတစ်ပါး အကျိုးကို လိုလားခြင်း၊ တပ်မက်မှု ကင်းမဲ့ခြင်း လို့လည်း ဆိုနိုင်တယ်လေ။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ မေတ္တာ တရားခေါင်းပါး လာတယ်လို့ပြောရင် မှားမယ်မထင်ဘူး။ မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပက္ခာ ဆိုတာတွေကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အတော်လေးကို နဲပါးလာကြတယ်။ ၀မ်းနဲစရာပဲ။ သက်ရှိတို့ အတွက် ရေတို့ လေတို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလို မေတ္တာဟာလည်း လိုအပ်တာပဲလေ။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟူးဟာ ရန်သူတွေကို မေတ္တာတရားနဲ့ အောင်မြင်တော်မူခဲ့တယ်။ မေတ္တာနဲ့ပေးတဲ့ဆေးဟာအစွမ်းထက်တယ်။ မေတ္တာနဲ့ပြောတဲ့စကားဟာ တန်ခိုးကြီးတယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဦးခေါင်းတော် ထက်က ဖြာထွက်နေတဲ့ ရောင်ခြည်တော်တွေဟာ မေတ္တာရဲ့ရောင်ခြည်တော်တွေပဲ။
သူကောင်းမှ ကိုယ်ကောင်း မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်းမကောင်းတဲ့ အထဲပါသွားလိမ့်မယ်။ သူမကောင်းလည် ကိုယ်ကောင်းလိုက်ပါ။ သူမကောင်းတိုင် ကိုယ်မကောင်းဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာကြီး လည်နေတာ ရပ်သွားလိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာကြီး ဆက်လည်ပတ် လို့ရအောင် မေတ္တာထားစမ်းပါလို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ ရက်စက်မှုတွေ၊ ကောက်ကျစ်မှု တွေနှင့်သာပြည့် နေသော ဒီကမ္ဘကြီးမှာ မေတ္တာများဖြင့် ခရီးဆက်ပါဟု ပြောသာပြောရသည်။ အားတော့မရှိလှပါ။ မလွယ်လှပါ။ ထိုမလွယ်သော အလုပ်ကို လုပ်နိုင်သူသည် ပညာရှိ သူတော်ကောင်းဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းကို ပညာရှိ သူတော်ကောင်းကြီး ဖြစ်စေချင်သည်။ မေတ္တာများဖြင့် ဘ၀ခရီးကိုဆက်ပါ။
Posted by friend group at 12:48 PM0comments
အတူသောက်ကြမယ်လေ . . . ။
လက်တွဲဖြေရှင်းကြမယ်နော် . . . ။
ပျော်စရာလည်း အတူတူ . . .
မဖုံးကွယ်ကြေး . . .
ထာဝရရင်းနှီးကြရအောင် . . .။
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ရက်မှာ ကျရောက်မယ့် သူငယ်ချင်းများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အတွက်ပေါ့။ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးလည်း ကိုယ့်နဲ့အတူ ကောင်းတူဆိုးဖက်၊ တိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဖက် သူငယ်ချင်းများနဲ့ ထာဝရလက်တွဲပြီး ပျော်ရွှင်စွာနေသွားနိုင်ပါစေလို့ သက်ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Posted by friend group at 10:14 AM0comments
ကျွန်တော် မဟုတ်ပေမယ့်လို့ ကျွန်တော့်အစား ကျွန်တော် ခံစားရသကဲ့သို့ နာကျင်နေသူ နှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ့ တင်မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားအားလုံး၊ သက်ရှိအားလုံးလို့ ပြောရင် ပိုပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြည့်စုံအောင် ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးပါပဲ။ မိဘနှစ်ပါးမှာမှ ကျွန်တော် အမေ့အကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမေဟာ ကျွန်တော် တစ်ခုခု ခံစားရတာနဲ့ သူခံစားရသလိုပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော့် ထက်တောင် ပိုမလားပဲ။ ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်နေရင် သူပျော်ရွှင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့် အကြောင်းကို ကျွန်တော့်ထက် သိတဲ့ သူဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ပိုလွန်းတယ်လို့လည်း မထင်စေချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် အတွက် အရာရာကို ရင်ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အတွက် လူဆိုးကြီးဖြစ်ရလည်း ဖြစ်တာပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက် ဘာမဆို သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်/ ဖြစ်ရဲပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကျွန်တော် သူ့ကို ပြောဖူးပါတယ်။ အမေဖြစ်တာမှ မဟုတ်တာ ကျွန်တော့် ဘာသာ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ သူများတကာကို ဘာမှ သွားမပြောပါနဲ့ပေါ့။ အမေကတော့ ဘာမှ ပြန်မပြောပါဘူး။ ပြုံးပြီး ကျွန်တော့်ကို တစ်ချိန် ဒီနေရာကို နင်ရောက်လာတဲ့ တစ်နေ့ကျရင် နင့်သားသမီးက နင့်ကို ဒီလို မပြောပါစေနဲ့လို့ပဲ ငါဆုတောင်းပါတယ်၊ နင်လည်း ဆုတောင်းပါတဲ့။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေကလည်း မင်းအမေက လွန်လွန်းပါတယ်ကွာ ငါတို့အမေဆိုရင် ဒီလို မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ ဟုတ်မှာပါ၊ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ မတူသလို အမေတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တချင်းလည်း တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သားသမီးတွေ အတွက်၊ သားသမီးတွေ အရေးက သူ့အရေးထက် ပိုအရေးကြီးကြတာချင်းတော့ တူကြမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ တုနှိုင်းလို့ မရတဲ့ မေတ္တာတရားတွေတော့ တူကြမှာပါ။ သူတို့ အသက်ထက်ကို ပိုတန်ဖိုးထား ကြတာချင်းလည်း တူကြမှာပါ။ အမေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို စပြီး သန္ဓေရှိစဉ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ဟာ သူရဲ့ ဒုတိယမြောက် အသက်ရူခြင်းနဲ့ ဒုတိယ အသက်ရှင်ခြင်း/ ဒုတိယအသက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ဆက်ရေးမယ်ဆိုလည်း သူ့ရဲ့ ကျွန်တော့်အပေါ်ထားတဲ့/ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားတွေ၊ ချစ်ခြင်းတွေကို ပြောလို့ ကုန်မယ် မထင်ပါဘူး။ လူဖြစ်စေ၊ တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်စေ ကျွန်တော် မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ အမေတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေက အားလုံး တထပ်တည်းပါပဲ။ အသိဉာဏ် ကွာဟမှုသာ ရှိပြီး မေတ္တာ တရားအားလုံးကတော့ အတူတူ ဖြစ်မှာပါ။ သူကတော့ ကျွန်တော့်အပေါ် ဒီလောက် ချစ်သလောက်၊ ဒီလောက် လုပ်ပေး သလောက် ကျွန်တော်ကရော သူ့အတွက် ဘာတွေ လုပ်ပေးခဲ့ဖူးသလဲ၊ သူ့အစား ဘယ်လောက် ခံစားပေးဖူးသလဲ စဉ်းစားကြည့်မိတော့ အရာထင်လောက်အောင် ဘာမှမလုပ်ပေးခဲ့ဖူးသလို၊ ဘာမှလည်း သူ့အစား မခံစားပေးခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေရော ကျွန်တော် မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော်၊ ကျွန်တော်တို့ မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ဘာတွေများ နားလည်ပေးဖူးသလဲ၊ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့အပေါ် ဘာမှ နားမလည်ပေးခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ကစပြီး ကျွန်တော် မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ အမေ့ကို တန်ဖိုးထား လေးစားစွာ ချစ်သွားမယ်လို့ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံရင်း . . .
Posted by friend group at 11:11 AM 1 comments
ဖိုးလမင်းလည်း သူ့အဆင်းနှင့် အလင်းနှင့်
မီးတိုင်ငယ်လည်း သူ့အရွယ်နှင့် အဆွယ်နှင့်
စံပယ်ဖူးလည်း သူ့ဂုဏ်ထူးနှင့် ငုံဖူးနှင့်
ပိတောက်ဝါလည်း သူ့အခါနှင့် နံ့သာနှင့်
မြစ်ပြင်နက်လည်း သူ့သိုင်းကွက်နှင့် လှိုင်းယက်နှင့်
စမ်းချောင်းတွေလည်း သူ့ချောင်းရေနှင့် လောင်းလှေနှင့်
မည်သည့်အရာ မဆိုသာတည့် သူ့မှာကိုယ့်မှာ အလှသာတည့်။
သဘာဝလျှင် အလှကိုယ်စီ စွမ်းရည်ကိုယ်ငှ လက်ဆောင်ငှ၏
အလှပန်းတို့ မငြင်ငြိုနှင့် ၀န်တိုမှုသာ မလှရာ၏
သူ့ဂုဏ် သူ့သိန် သူ့အရှိန်နှင့် အချိန်အခါ နေရာဒေသ
ဌာနအလျောက် အရေးရောက်သည် စွမ်းနိုင်လောက်သူ
ဆရာတင်မိုး၏ ကဗျာအား ခံစားမျှဝေပေးပါသည်။
Posted by friend group at 10:30 AM0comments
လိုချင်ရင် . . . ပေးပါ
ဘ၀မှာ၊ လောကမှာ ကိုယ်လိုချင်တာ တစ်ခု ရဖို့အတွက် တစ်ခုတော့ ပေးရတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ လက်မခံလို့ မရတဲ့ အမှန်တရား တစ်ခုပါ။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာရဖို့အတွက် ကိုယ့်ဆီက ချစ်ခြင်း မေတ္တာကို ပေးရသလို၊ ကိုယ်ရဲ့ လိုချင်မှုတစ်ခုအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ အရာတစ်ခုကိုတော့ ပေးကြရမှာပါ။ လူအများရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို လိုချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာ လူအများကို ချစ်ခင်တဲ့ စိတ်လေးထားဖို့တောင် ၀န်လေးနေမယ် ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အဲဒီ ချစ်ခင်မှုကို ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပြန်အလှန် ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ စစ်မှန်တဲ့ ကြင်နာမှုကို ရရှိဖို့ ကိုယ့်ဆီက စစ်မှန်တဲ့ ကြင်နာမှုကို အရင်ဆုံးပေးပါ။ တူညီတဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အများတကာက မုန်းနေတယ် ဆိုရင် ကိုယ်က အဲဒီ အများကို မုန်းနေလို့ ဖြစ်မှာပါလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို အများတကာက မုန်းနေတယ် ဆိုပေမယ့် သူတို့ကို ပြန်မမုန်းဘဲ မေတ္တာထားမယ် ဆိုရင် တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကို ပြန်လည် မေတ္တာထား လာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ခက်ခဲမယ်၊ စိတ်မရှည်စရာ ဆိုပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာအတွက် ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန် သက်ရောက်မှု ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် မပြောလည်း သိပြီးသား ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ လောကကြီးထဲမှာ စစ်မှန်တဲ့ ကြင်နာမှုထက် အမုန်း အာဃာတတွေ၊ မာနတွေ၊ မောဟတွေနဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ထိုးနှက်မှုတွေက ပိုများနေပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ကြင်နာမှု မေတ္တာတွေ အများအပြား လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အများနဲ့ တစ်ယောက် ဆိုပေမယ့်လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ကြင်နာမှု ရရှိဖို့အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ကြင်နာမှုများ ပေးနိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆု ပြုရင်း . . .
Posted by friend group at 11:07 AM 1 comments
အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ-၅၊ အမှတ်-၁၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၃၅။
Posted by friend group at 7:22 AM 1 comments
ဒေါသတွေထိန်းချုပ် လျှော့ဖို့ . . .
လူပဲ . . . ဒေါသနဲ့တော့ ဘယ်ကင်းပါ့မလဲနော်။ ဖြစ်သင့်တဲ့ အချိန်မှာ၊ ထွက်သင့်တဲ့ လူအပေါ် ထွက်မိရင်တော့ တော်သေးတာ ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒေသနောက် အမှားပါ တတ်တာမို့ ထိန်းနိုင်ရင် အကောင်းဆုံး ပါပဲလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က တိုက်တွန်းပေမယ့် အခုချိန်ထိတော့ ကျွန်မလည်း ဒီဒေါသကို ထိန်းမနိုင်သေးပါဘူး။ ဒေါသကြောင့် အမှားလုပ်မိတာ၊ အမှား ပြောမိတာ တွေကိုတော့ အနည်းဆုံး ရှောင်ရှားနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းများလည်း ဒေါသထွက် လာတဲ့အခါမှာ ဒီလို နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ဖြေလျော့ကြည့်ပေါ့။
၁။ အလကားနေ ဒေါသထွက် တတ်ရင်တော့ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ နေရာတစ်ခု ရှာသင့်ပါပြီ။ အားရပါးရ ပေါက်ကွဲဖို့ပေါ့။ ကိုယ် မကျေနပ်တဲ့ လူနဲ့ အကြောင်းအရာကို အဲဒီမှာ ပြေပျောက်တဲ့အထိ စိတ်ကြိုက်အော်ပြီး ဒေါသတွေ လျှော့ပါ။
၂။ သင်အရမ်း ဒေါသထွက်နေပြီ။ ဒါဆို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ငြိမ်သက်သွားစေဖို့ အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှုရှုပေးပါ။ စိတ်ထဲက တင်းကျပ် နေတာတွေ နည်းနည်းတော့ လျော့သွားမှာပါ။
၃။ တစ်ကနေ ၁၀အထိ ရေကြည့်မယ်။ တစ် . . . နှစ် . . . သုံး . . .။ ဒါလည်း ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းပါပဲ။ နံပါတ်တွေကို တစ်ခုချင်း ရေရင်းနဲ့ သင့်ရဲ့လက်ရှိ တင်းကျပ်မှုတွေကို မေ့သွားပါလိမ့်မယ်။
၄။ လမ်းထလျှောက်လိုက်။ ပျော်စရာ သီချင်းလေးတွေကို လေချွန်ရင်း ရင်ထဲက မကျေလည်မှုတွေကို ဖြေလျော့တာလည်း ပြေရာ ပြေကြောင်း တစ်ခုပါပဲ။
၅။ ငြိမ်ငြိမ် သက်သက်လေး နေလိုက်ပြီး ကိုယ်ဘာကြောင့် ဒေါသထွက် နေရလဲ။ ဘာကိုလဲ။ သေသေချာချာ စဉ်းစား အဖြေ ရှာကြည့်ပါ။ တစ်ခုခုကို မလုပ်ခင် သေချာဆန်းစစ် ကြည့်တဲ့ အနေအထားမျိုးနဲ့ သင့်ရဲ့ ဒေါသကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာသိရင် ဖြေရှင်းဖို့ အတွက်လည်း သိလာမှာပေါ့။
၆။ တချို့ လူတွေကတော့ ဒေါသထွက်ရင် ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ ရိုးရိုးလေးပါပဲ။ သီချင်းနားထောင်တာတဲ့။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်း၊ တေးသွားမှာ နစ်မျော နေတာကလည်း ဒေါသတွေ မေ့ပျောက်သွားစေမယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်မကတော့ အခု ရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဒေါသတွေထိန်းချုပ်ဖို့ နည်းလမ်း ၆သွယ်ထဲက နံပါတ် ၆ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ပဲ အခုချိန်ထိ ဖြေရှုင်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလွယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒေါသထွက်အောင် လုပ်ထားတဲ့ လူကို မြင်နေတာနဲ့ အလိုလို စိတ်က ဒေါသတွေ ထွက်နေတာပဲ။ အမြန် မေ့ပျောက်ဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲပါတယ်။
လူဆိုတာကလည်း အတ္တ၊ မာန တွေနဲ့ တည်ဆောက် ထားတဲ့ သူတွေဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုနည်းနည်းလေး စိတ်တိုအောင် ပြောမိလုပ်မိရင် သည်းညည်းခံတဲ့ လူတွေမှ မဟုတ်တာ။ အဲဒီတော့ ခက်နေတာပေါ့။ သူငယ်ချင်း တို့တွေလည်း ကျွန်မလိုမျိုး မဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ပြီးနေနော်။
ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာ မကောင်းပါဘူးလို့ သိပေမယ့် အမြဲတမ်း ဒေါသထွက်နေရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ ထွက်သင့်တဲ့ အခါမှ ဒေါသထွက်ပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း ကျွန်မလည်း ဒေါသတွေကို ခဏခဏ မထွက်မိအောင် ကြိုးစားပြီး နေထိုင်သွားမှာပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Posted by friend group at 11:57 AM0comments
လောကတွင် အချစ်ဆိုသည့် အရာသည် အလွန်နက်နဲ ရှုပ်ထွေးပြီး လျှို့ဝှက်ချက် များသည့် အရာဟု ကျွန်တော် ထင်မိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အလွန်နူးညံ့သကဲ့သို့ တစ်ခါတစ်ရံ အလွန် ခက်ထန် မာကြောတတ်ပါသည်။ အချစ်သည် လူတွေကို ရုပ်သေးရုပ် သဖွယ် အသက်အရွယ် မရွေး၊ အချိန်အခါ မရွေး၊ နေရာ မရွေး ငိုစေ၊ ရယ်စေ၊ ၀မ်းနည်းစေ၊ ပျော်ရွှင်စေ၊ ကြည်နူးစေပါသည်။ ဘ၀မှာ အံ့သြဖွယ်တွေ ဖန်တီးတတ်တဲ့ အရာဟာ ခြွင်းချက်အနေနဲ့ အချစ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ သူ့ကြောင့်ပဲ ၀မ်းနည်းရ၊ သူ့ကြောင့်ပဲ ပျော်ရွှင်ရပြီး သူ့ကြောင့်ပဲ ခံစားရကာ သူ့ကြောင့်ပဲ သေချင်နေရာကနေ လူတစ်ယောက် အဖြစ် ဆက်လက် ရှင်သန်ချင် လာရပါတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာကြောင့် စိတ်ကူးထဲမှာရော၊ လက်တွေ့မှာရော ခံစားမှု အမျိုးမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အချစ်ဟာ ပကတိ ရိုးသားပြီး ဖြူစင်ပါတယ်။ သူနဲ့သာဆိုရင် တဲအိုပျက်မှာ နေရ နေရ၊ ထမင်းရည်ပဲ အတူလျှက်ရ လျှက်ရ ဆိုတဲ့ အချစ်ကို ဖွဲ့နွဲ့ထားတဲ့ စာသားတွေဟာ တကယ့် လူ့ဘ၀ကို ရင်မဆိုင်ပဲ အချစ်ကိုပဲ ဦးတည် စဉ်းစားမယ် ဆိုရင် အဲဒီစာသားဟာ မှန်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာ လူတစ်ယောက် ရင်ထဲကို ရောက်လာပြီဆိုရင် ဘာမဆိုကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ၀န်မလေးတတ်သလို ချစ်သူအတွက် သူရဲကောင်း ဖြစ်ချင်လာကြပါတယ်။ ချစ်သူအတွက် ကလေးဆိုးလည်း ဖြစ်လာချင် ပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ပန်းပွင့်လေးလို နူးညံ့လာသလို တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဓါးလိုပဲ ထက်မြက် လာတတ်ပါတယ်။ သိမ်မွေ့ပြီး ထိရောက်တဲ့ လူသတ် လက်နက်တွေထဲမှာ အချစ်ပါသလို သိမ်မွေ့ ထိရောက်တဲ့ အားဆေးတွေထဲမှာ အချစ်လည်း ပါပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် လူသတ်သမား ဖြစ်လာတတ်သလို အချစ်ကြောင့် အားအင် အပြည့်နဲ့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ အရာတွေကို စွမ်းဆောင် လာစေပါတယ်။ အချစ်ကို ဦးတည် တန်ဖိုးထားသူတွေ အတွက် အတားအဆီး ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အတားအဆီး အားလုံးကို အချစ်က ပယ်ရှားစေပါတယ်။ အချစ်ကို ဘယ်လိုပဲ အဓိပ္ပါယ်တွေ ဖွင့်ဆိုပါစေ သူ့ရဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေကို ဘယ်အရာကမှ လိုက်မီမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ဆိုရင် အချစ်အတွက်ပဲ အသက်ရှင်နေရသလို အရူးအမူး ခံစားနေသူတွေကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်က အချစ်ကို အကောင်းဘက်က အများဆုံး ရေးထားပေမယ့် အချစ်ကြောင့်ပဲ ဘ၀ပျက် မတတ် ခံစားနေရသူတွေ ဘ၀ဆုံးသွားသူတွေ အများကြီးလည်း ရှိပါတယ်။ အချစ်ရဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုအပေါ် ခံစားလွန်းပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုတွေ လျော့ရဲပြီး ဘ၀ကို ဆောက်တည်ရာ မရ ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကြောင့်ပဲ ၀မ်းနည်းရ၊ သူ့ကြောင့်ပဲ ပျော်ရွှင်ရ၊ သူ့ကြောင့်ပဲ ခံစားရ၊ သူ့ကြောင့်ပဲ လူတစ်ယောက် အဖြစ် ဆက်လက် ရှင်သန်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်စေတဲ့ သိမ့်မွေ့နူးညံ့တဲ့ အချစ်ကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးစွာနဲ့ ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း ချစ်တတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း . . .
Posted by friend group at 4:02 PM0comments
Labels: အချစ်၊ အမုန်း
လွန်ခဲ့သည့် ရက်က ကျွန်တော် ကြည့်မိသော ကိုရီးယားဇာတ်လမ်း တစ်ခုတွင် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေစေဖို့ “တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားသုံးခွန်းတည်းနှင့် အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေအောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒါကို စဉ်းစား ကြည့်မိတော့ မှန်သည်ဟု ထင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးအတွက်တော့ မဟုတ်ပါ။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင် “တောင်းပန်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဆိုသည့် စကားနှစ်ခွန်း ပြောရုံနှင့် ကိစ္စ အတော်များများ အဆင်ပြေသည်ဟု ကျွန်တော် ထင်မိပါသည်။ လောကမှာ လူတိုင်း (လူတော်တော် များများ)သည် ကိစ္စအားလုံးတွင် ကျေးဇူးတင်ဖို့နှင့် တောင်းပန် စကားပြောဖို့ အလွန် ၀န်လေးကြသည်။ ကျွန်တော် ဆိုရင်လည်း ကိစ္စတစ်ခု မှားသွားလို့ တောင်းပန်ရမှာကို ဘာကို ၀န်လေးမှန်းမသိ ၀န်လေး နေတတ်သည်။ သူများ ကူညီလို့ ကျေးဇူးတင်ရမှာကိုလည်း ဘယ်လိုမှန်းမသိ ၀န်လေးနေမိပြန်သည်။ ကိုယ်ကသာ သူများကို တောင်းပန်ရမှာ၊ ကျေးဇူးတင်ရမှာကို ၀န်လေးနေတတ်ပေမယ့် သူများက ကိုယ့်ကို တောင်းပန်ရမှာ၊ ကျေးဇူးတင်ရမှာ ၀န်လေး နေတတ်တာကို အပြစ်မြင်မိသည်။ လူတိုင်းဟာ အထူးသဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရမှာထက် တောင်းပန်ရမှာကို ပိုပြီး ၀န်လေးတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ထက် ငယ်တဲ့သူအပေါ်၊ ကိုယ့်ငယ်သားအပေါ်၊ ကိုယ့်ထက် နိမ့်ကျသူ (လူတစ်ချို့၏ သတ်မှတ်မှု)အပေါ် အမှားပြုလုပ်မိလို့ မှားမှန်းသိတဲ့အခါ တောင်းပန်ဖို့ ပိုပြီး ၀န်လေး နေတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် ကိုယ့် ငယ်သား ထောက်ပြတဲ့ ကိုယ့်အမှားကို မှားမှန်းသိပေမယ့် မှားတယ်လို့ ၀န်ခံလိုက်ရင် သိက္ခာကျမှာ စိုးတာနဲ့ ကိုယ်လုပ်တာ မှန်တယ်ဆိုပြီး မရမက တင်းခံထားတတ်ပါတယ်။ တော်ရုံ ကိစ္စမျိုးမှာ အရေးမကြီးပေမယ့် အားလုံး ဒုက္ခရောက်မယ့် ကိစ္စမျိုးမှာတော့ သူ့ရဲ့ တင်းခံထားမှုကြောင့် အဖွဲ့အစည်းဟာ ပျက်စီးသွား တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး လေးစားမှု အပြန်အလှန်ထားပြီး ကိုယ်က သူများအပေါ် အမှားလုပ်မိရင် တောင်းပန်လို့၊ ကိုယ်အပေါ် သူများက ကူညီပေးတဲ့အခါ အပြန်အလှန် ကျေးဇူးတင်လို့ နှစ်ခွန်းတည်းသော စကားလေးကို လက်ကိုင်ပြုရင်း သာယာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ကြပါစို့လို့ တိုက်တွန်းရင်း . . .
Posted by friend group at 2:00 PM0comments
Posted by friend group at 1:14 PM0comments
အချစ်က ကိုယ့်ကို ငြင်းပယ်တယ်ဆိုရင်
ဘာကြောင့် သီချင်းတွေနဲ့ ဖွင့်ဆိုရတာလဲ
ပြီးတော့ . . . . .
လွှတ်လိုက်ရတာလဲ . . . ။
Posted by friend group at 12:13 PM 1 comments
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားအောင် နေရမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ကိုယ့်ကို လေးစားအောင် နေရမယ်။ ဘယ်သူ ဘယ်လိုထင်ထင် ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုပြီးတော့ နေချင်သလို နေလို့မရဘူး။ အများနဲ့ နေကြရတဲ့ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်အတွက်ကော၊ အများအတွက်ပါ အမြဲတမ်း တွဲပြီးတော့ စဉ်းစားရမယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားနိုင်တဲ့သူ၊ သူတစ်ပါးကိုလည်း လေးစားတဲ့သူ၊ သူတစ်ပါးရဲ့ လေးစားမှုကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် ခံရတဲ့ သူဟာ လောကကို အကျိုးပြုတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း လေးစားမှု ရှိအောင် ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ကိုယ့်ကို လေးစားလာအောင် လူတိုင်း ကြိုးစားပြီးနေရင် ဒီလောကကြီးဟာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လောကကြီးဖြစ်မယ်။
နားလည်စေချင်တာကတော့ ဘ၀မှာ ဒီလို အခြေခံကျတဲ့ အချက်ကလေးတွေက အရေးအကြီးဆုံး ဆိုတာပဲ၊ အိမ်ရဲ့ အုတ်မြစ်လိုပဲ၊ သူမရှိရင် ကျန်တာ ဘာမှလုပ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ပညာတတ်နေ တတ်နေ၊ စိတ်ထားမကောင်းဘူး၊ အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းဘူး၊ ခန္ဓာကိုယ် မသန့်ရှင်းဘူး၊ နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လည်း မသန့်ရှင်းဘူးဆိုရင် လူ့တန်ဖိုးလို့ ပြောလို့မရဘူး။
တချို့ပညာ သိပ်မတတ်ပါဘူး။ ဘာဘွဲ့မှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထား ကောင်းတယ်၊ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းတယ်။ နေတာ၊ ထိုင်တာ သပ်ရပ်တယ်၊ သန့်ရှင်းတယ်။ အဲဒီလို လူကို လေးစားပါတယ်။
လုံ့လ ၀ီရိယရှိဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ် တကယ် တတ်နိုင်တာကို လုပ်နေရင်းနဲ့ ပိုကောင်းအောင် လုပ်သွားရမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ``ငါ လူပျင်း´´လို့ တွေးမိရင် ဘယ်လို ခံစားရမလဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားလို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ပြီးတော့လည်း မရတော့ဘူးနော်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကရော ``ဒီလူဟာ လူပျင်းပါကွာ´´လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ အဲဒီလို အတွေးမျိုး တွေးတယ်ဆိုရင်ပဲ လေးစားမှု မရှိတော့လို့ တွေးတာပဲ။ ပျင်းတာဟာ လောကကြီးကို ဖျက်ဆီးတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်မှာ ခန္ဓာကိုယ် အင်အားတွေ ရှိတယ်။ စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေ ရှိတယ်။ အသိဉာဏ် အင်အားတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီ အင်အားတွေကို ကောင်းတဲ့နေရာမှာ အပြည့်အ၀ သုံးနေရမယ်။ သုံးနေရင် ထွက်နေမယ်။ မသုံးဘဲထားရင် ကြာရင် မထွက်တော့ ဘူး။ လုပ်နိုင်သလောက် အစွမ်းကုန်လုပ်မှ တကယ်ကျေနပ်မှု ရမယ်။ လုပ်နိုင်သလောက် မလုပ်ဘဲ လျှော့လုပ်ရင် ကြာရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ လျော့သွားမယ်။
ကောင်းတယ်၊ လုပ်သင့်တယ်၊ အကျိုးရှိတယ်လို့ သိထားရင် လုပ်နေမှ ဖြစ်မယ်၊ ကောင်းတယ်၊ အကျိုးရှိတယ်၊ လုပ်သင့်တယ်လို့ သိလျက်နဲ့ မလုပ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှု နည်းသွားမယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သိပ်မလေးစားဘူး။
လုပ်သင့်တာတွေကို သိကြပါတယ်။ သိသလောက်ကို ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် ဆိုရင်ပဲ တော်တော် တိုးတက်မှာပါ။ သိသလောက်ကို တောင် တကယ် မလုပ်ကြဘူး။ သက်သာအောင် နေကြတယ်။ အခု သက်သာအောင်နေရင် ရေရှည်မှာ မသက်သာဘူး။ အပျော် အပါးကို ဦးစားပေးပြီးတော့ ရေရှည်မှာ အကျိုးရှိမယ့် အလုပ်ကို မလုပ်တဲ့သူဟာ ရေရှည်မှာ မပျော်နိုင်တော့ဘူး။ ပူပင်သောက များမယ်။
သိတော့ သိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ မလုပ်တာလဲ၊ အဲဒါ စဉ်းစားဖို့ ကောင်းတယ်။ အရေးမကြီးဘူး ထင်လို့လား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှုရှိအောင် နေဖို့ဟာ အရေးအကြီးဆုံး အလုပ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို အားလုံးနားလည် သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းများအားလုံးလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင် လောကကို အကျုိးပြုတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာမှာပါလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by friend group at 12:03 PM0comments
မိမိ၏ ဘ၀ကို အောင်မြင်အောင် တည်ဆောက်ရာ၌ မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ ခုတုံးသဖွယ် အသုံးမချသင့် မိမိ၏ ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်သို့ ရှေးရှုလျှောက်လှမ်းရာ၌ မည်သူတစ်စုံ တစ်ယောက်ကိုမျှ တွန်းတွန်းထိုးထိုး မလုပ်သင့်။ တိုက်တိုက်ခိုက်ခိုက် မလုပ်သင့် ။ သူတစ်ပါးတို့၏ မျက်ရည်ပေါက်များစွာကို အရင်းအနှီးပြုလျက် မိမိ၏ ကြီးပွားချမ်းသာ မှုကို မရှာသင့်ကြောင်း၊ တစ်ခဏတာ ကြီးပွားချမ်းသာမှုပဲရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၀ဋ်ဆိုတာမျိုးက တန်ပြန်လည်တတ် ကြောင်းကို သူငယ်ချင်းများ သိအောင် စေတနာလေးနှင့် ရေးသားပေး လိုက်ပါတယ်။
Posted by friend group at 10:53 AM 1 comments
ကျွန်မတို့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ များလာသောအခါ ကျွန်မတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိနေရင် စိုးရိမ်ပူပန်မှု ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် ကျွန်မတို့ စိုးရိမ်မှု ဖြစ်ရတာလဲ။ တချို့ကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန် နေတတ်ကြပါတယ်။ တချို့က စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ များပြီး စိတ်ဓာတ်ကျ နေကြပါတယ်။ တချို့က အိမ်တွင်းရေး ပြဿနာတွေနဲ့ သောက ရောက်နေကြပါတယ်။ တချို့က အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုသော ကံကြမ္မာကိုတွေးပြီး စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါတယ်။ တချို့ကျတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ မိမိတာဝန် ယူထားသည့် အလုပ်ကိစ္စများအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ကြပါတယ်။ ကျွန်မဆိုလျှင် စိုးရိမ်ပူပန်မှု အရမ်းများပါတယ်။ ကျွန်မ စိုးရိမ်ပူပန် လာပြီဆိုလျှင် မျက်နှာပျက်ပြီး လက်ဖျားခြေဖျားတွေ အေးတဲ့အထိ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်မ စိုးရိမ်နေတဲ့နေ့ဆိုလျှင် ကျွန်မစိတ်တွေက မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီး အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှား လာပါတယ်။ အရမ်းငိုချင်လာသလို ၀မ်းနည်းမှု မျိုးများ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီလို စိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်လာရင် ကျွန်မတနေ့လုံး မပျော်ရွှင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီလို စိုးရိမ်မှုဖြစ်ရတာ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မယုံကြည်မှု မရှိလို့ ဖြစ်ရတာပါ။ အဲဒါကို ကျွန်မ သိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကို ကျွန်မ အခုအချိန်ထိ ဖျောက်ဖျက်လို့မရ ဖြစ်နေပါတယ်။
စိုးရိမ်ပူပန် နေရုံသက်သက်နဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲမပစ်နိုင်ပါဘူး။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဟာ ဘာကိုမှ မပြီးမြောက်စေပါဘူး။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဟာ အခုဖြစ်ပေါ်နေသော မိမိ၏ဒုက္ခကို မကယ်တင်နိုင်သလို မိမိဆီ ကျရောက်လာမည့် အန္တရာယ်ကို လည်း ကာကွယ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ အလုပ်ခွင်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှု များနေလျှင် မိမိလုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များ မပြီးမြောက် နိုင်ပါဘူး။ အိမ်တွင်းပြဿနာတွေ အပေါ်မှာ မိခင်တစ်ယောက် လုပ်သူသည် စိုးရိမ်ပူပန်မှု များနေလျှင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာသည် ပို၍ကြီးထွား လာရုံသာ ရှိပါမည်။ တကယ်တော့ စိုးရိမ်မှုဟာ မနက်ဖြန်ဆိုတဲ့ အနာဂတ်ကို ကြောက်ရွံ့နေ သောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန်ကို ကျွန်မတို့ မမြင်နိုင်သလို၊ ကြိုတင်ပြီးလည်း ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဟာ မနက်ဖြန်ရဲ့ သောကကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်း မပေးနိုင်သည့်အပြင် ဒီကနေ့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မိမိ၏ ပျော်ရွှင်မှုများကိုပါ အမှန်တကယ် ပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်မလည်း စိုးရိမ်ပူပန် မှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုးစားပါတော့မယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကျွန်မလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မဖြစ်ရအောင် ရေးသား တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စိုးရိမ်မှုဟာ ယုံကြည်မှုနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လည်း မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှု ရှိသော သူများဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ဒီစာလေးကို ကျွန်မ နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။ စိုးရိမ်မှုဟာ လူတိုင်းရဲ့ မနက်ဖြန်ကို လှပမှုမဖြစ်စေပါဘူး။
Posted by friend group at 9:46 AM0comments
ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်သိမှပဲ သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်အောင် မနစ်နာအောင် သတိနဲ့ ထိန်းသိမ်းပြီး နေလို့ရမှာနော်။ သာမန် အားဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကို မသိကြတော့ ကိုယ့်မှာလည်း စိတ်ထဲမှာ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိုးရိမ်စရာ၊ သောကဖြစ်စရာတွေက များနေတော့ ချစ်တယ်လို့ ဆိုသော်လည်း ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေတဲ့ သူတွေကို လွှတ်ခနဲ လွှတ်ခနဲ ပြောမိတယ်။ ပြောမိတော့ တစ်ဖက်က စိတ်ဆင်းရဲရပြီ၊ သူက ပြောလိုက် ကိုယ်က ပြောလိုက်နဲ့ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေက နေ့တိုင်းလိုလိုပဲ တွေ့ရတာပဲ။
အဲဒီလိုပဲ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်နေတဲ့လူချင်းပဲ အဖော်လုပ်ပြီး နေကြတာပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်တောင်မှ စိတ်ချမ်းသာအောင် မထားနိုင်သေးဘူးဆိုရင် သူတစ်ပါးကို စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါကိုလည်း သေသေချာချာ နားလည် သဘောပေါက်စေချင်တယ်။
သူ့ကို ငါသိပ်ချစ်တယ်၊ သူ့ကို ငါ သိပ်သနားတယ်၊ သူ့ကို ငါ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားချင်တယ်လို့ ဘယ်လိုပင် ပြောသော်လည်းပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှ စိတ်ချမ်းသာအောင် မနေနိုင်ရင် ကိုယ့်စိတ် မကြည်တဲ့အခါမှာ အပြစ်ရှာပြီး ပြောတော့တာပဲနော်။ ကိုယ့်မှာ အားငယ်နေတယ်။ ကြောက်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒါလေးကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ သူတစ်ပါးကို အပြစ်ဖို့ချင်တယ်။ သေသေချာချာ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အနီးမှာနေတဲ့ လူတွေကို အဲဒါမျိုး ပြောမိတာ အများဆုံးပဲ။
အားငယ်စိတ်၊ ကြောက်စိတ်၊ ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ထိခိုက်အောင်၊ နစ်နာအောင် ပြောနေ ဆိုနေကြတာပဲ။ ငါ့ကို အထင်မကြီးဘူး၊ ငါ့ကို မလေးစားဘူး။ အဲဒီလို အတွေးတွေက ဖြစ်နေတာနော်။ မိသားစု အချင်းချင်းတောင် သူတို့က ငါ့ကို ဘယ်လို ထင်နေတယ် စသဖြင့် တွေးတတ်တယ်။ အားရှိတဲ့လူဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မနိုင်ချင်ဘူး။ သူ အနိုင်အရှုံးကို မလိုချင်ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ အားငယ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ နိုင်ရမယ့်လူ ရှာတော့တာပဲ။
ကိုယ့်အားငယ်စိတ်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ``အော် ငါ့စိတ်ထဲမှာ နဲနဲ အားငယ်နေတာကိုး´´ လို့ သိနေရင်ကိုပဲ ဒီ စိတ်ကလေးဟာ နဲနဲ သက်သာသွားတယ်။ သိနေတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို မခံရတော့ဘူး။ မခံရတော့ သူတစ်ပါးကို အနိုင်ယူဖို့ မကြိုးစားတော့ဘူး။ အဲဒီ အားငယ်စိတ်ကို ပိုပြီးတော့ မြင်လာတဲ့အခါမှာ ဒီအားငယ်စိတ်ဟာ ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ သူများ ကိုယ့်ထက် ဘယ်လောက်သာနေနေ ကိစ္စမရှိဘူး။ သူတို့က ငါ့ထက် သာသွားလို့ဆိုပြီး အားမငယ်ဘူး။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြစ်မရှာပဲ၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် ချမ်းသာအောင် ထားတတ်တဲ့ လူနှစ်ယောက် ဆက်ဆံရင် ဘယ်လောက် ကောင်းမလဲ၊ ဒါကြောင့် အဲသလိုမှ မဖြစ်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ လက်ရှိရှိနေတဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ စိတ်ကျေနပ်မှု၊ စိတ်အေးချမ်းမှု မရနိုင်သေးဘူး။ နဲနဲတော့ အဖော်ရတာပေါ့။ တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်မနေဘူး။ ကိုယ့်အတွက် စားဝတ်နေရေး အတွက် အထောက်အပံ့ပေးမယ်၊ တကယ့် အဖော်ကောင်းတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် တကယ့် အဆွေမွန်ကောင်းကို လိုချင်ရင် ပထမဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆွေမွန်ကောင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး နေနိုင်ဖို့လိုတယ်။
Posted by friend group at 9:42 AM0comments
`` ဆောင်းရာသီရဲ့ ပြင်းထန်မှု ကြားကပဲ ကျွန်မ နောက်ဆုံး သိရှိလာတာက ကျွန်မရဲ့ အတွင်းစိတ်မှာ မဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့ နွေရာသီ တည်ရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ´´
ကျွန်မ အသက်အနည်းငယ် ကြီးလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ရဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပိုပြီးသိရှိ လာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀ အဓိပ္ပာယ်တွေ၊ တန်ဖိုးတွေက တဆင့် ရှုမြင်လို့ရတဲ့ ဘ၀က ၀ိရောဓိတွေ၊ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ၊ တစ်ဖက်ပိတ် လမ်းဆုံးတွေ၊ ရှုမြင်ရတာ ဆိုးရွားလှတဲ့ အမှောင်ရိပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်နေ ရမှာပါပဲ။ ဒီလို အဖြစ်တွေကို ရှောင်ကွင်းပြီးသွားဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဘယ်လမ်းမှာမဆို ပြဿနာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံကြရမှာပါပဲ။
ကြိုးစားကြည့်ပေမယ့်လည်း ဘ၀ကို သိပ်လှပပြီး ပျော်ရွှင်စဖွယ် ကောင်းသလို လှည့်စားပြီး နေကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘ၀ဟာ မလိုအပ်တဲ့ စိတ်ပျက်စရာတွေ ဒါမှမဟုတ် အကျိုးထိရောက်မှု မရှိတာတွေ၊ အပေါ်ယံ အကာတွေနဲ့ ကံဆိုးမိုးမှောင် ကျသွား နိုင်ပါတယ်။
နွေရာသီမှာလည်း ဆောင်းရာသီရဲ့ သန္ဓေလေးက အမြဲရှိပါတယ်။ သင်ဟာ အောက်ကို ကျရောက်နေရင် အပေါ်ကိုလည်း တစ်လှည့်ရောက်ပါ လိမ့်ဦးမယ်။ အောင်မြင်မှုရဲ့ ပျော်ရွင်စရာ လေးတွေထဲမှာ ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ မျိုးစေ့ကလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ် သောကတွေ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ စွမ်းအင်သစ်နဲ့ ဘ၀ရဲ့ အလင်းရောင်လေးက လင်းလက်နေပါတယ်။ အလင်းနဲ့အမှောင်၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ သာယာမှုနဲ့ နာကျင်မှု၊ သေခြင်းနှင့် ရှင်ခြင်းတို့ အမြဲဒွန်တွဲပြီး ရှိနေမြဲပါပဲ။
ဘ၀ကို ထွေးပွေ့ကြိုဆိုဖို့က ပန်းတိုင်အဖြစ် သူ့ဘာသာသူ တည်ရှိနေတာ မဟုတ်ပါလား။ ဒီလို ကြိုဆိုနိုင်ဖို့ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်တဲ့ အချိန် လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမယ့် အချိန်ကို ပယ်ရှားရပါမယ်။ ပစ္စုပ္ပန် အချိန်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှု ရှိရပါမယ်။ ဒါမှသာ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရပြီး ပျော်ရွှင်မှု မပေးနိုင်တာ မှန်သမျှကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ သင့်ရဲ့ ဆောင်းရာသီထဲမှာ နွေရာသီကို ရှာဖွေပါ။ ပြီးတော့ နွေရာသီထဲမှာလည်း ဆောင်းရာသီကို ရှာဖွေကြည့် ကြပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင်တို့တွေရဲ့ ဟန်ချက်ကို တွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါကြောင်း ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Posted by friend group at 11:17 AM0comments
ဘ၀ရဲ့ အချိုးအကွေ့တိုင်းကို ဆန်းစစ်ရှာဖွေဖို့
ချစ် . . . တို့နှစ်ယောက် အတူ
ဘ၀ရဲ့အလှကို တို့နှစ်ယောက် အတူ ခံစားစို့။
နှစ်သိမ့်ပျော်ရအောင် . . . ။
ကြံ့ကြံ့ခံရအောင် . . . ။
ကြုံရမယ့် သောကတစ်ခုကို ထင်လင်း
ချစ် . . . ဟက်ဟက်ပက်ပက် တစ်ကြိမ်လောက်
ချစ် . . . တစ်စက် မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ
ဘ၀ရဲ့ ပျော်စရာတွေကို တို့နှစ်ယောက်အတူတူ
ကမ္ဘာမြေလောကကြီး ရူးသွပ်ဖောက်ပြန် သွားတဲ့အခါ
ချစ်နှင့်တို့ ၀ိညာဉ်ချင်း ကူးယှက်ပြီး
တို့နှစ်ယောက်အတူတူ ငြိမ်းအေးခြင်းကို . . .
ရှာကြရအောင် . . . ။
လမ်းဆုံးသွားရင်တော့ . . .
မျှော်လင့်ပါတယ် . . .
အချစ်စစ်ရဲ့ အလှတရားကို တို့နှစ်ယောက်အတူတူ
သိပြီးပြီပဲ . . .
တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဟာ . . .
ဟိုး . . . ရင်တွင်းကနေ လာတာလေ . . . ။
Posted by friend group at 10:12 AM0comments
သြော်-အမေ ``မာန်မချသေးပါလား´´ ။ ။
Posted by friend group at 10:47 AM 1 comments
´´မောင့်အမေက ငါနဲ့မောင့်ကို သေဘာမတူနိုင်ဘူးတဲ့ဟာ``
မျက်စိမျက်နှာတွေ ပျက်ပြီး အခန်းထဲဝင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီက တီးတိုးထွက်ပေါ်လာတဲ့ စကားသံပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ငယ် ကျွန်မ ထပ်ပြီးစပ်စုလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငယ့်ဆီက နောက်ထပ် အသံထပ် ထွက်မလားတော့ဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကျွန်မခေါင်းထဲကို တသီတတန်းကြီး ၀င်လာတယ်။ ငယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကိုလည်း တွေးကြည့်နေမိတယ်။ ငယ်ရဲ့ ရုပ်ရည်ဟာ မဆိုးတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။ ပညာအရည်အချင်း ဆိုရင်လည်း သာမန်ထက်မြင့်တဲ့ အနေအထား တစ်ရပ်မှာရှိသူပါ။ မိဘ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ပညာတတ် အသိုင်းအ၀ိုင်းပါ။ ပိုက်ဆံကတော့ မရှိမရှားပေါ့။ သူရဲ့အလုပ်က တောရုံ မိန်းကလေး တစ်ယောက် မရနိုင်တဲ့ လခမျိုးနဲ့ အလုပ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာလည်းရှိတဲ့အလုပ်ပါ။ ဒါဆို သူချစ်သူရဲ့ မိခင်က ဘယ်အချက်ကို သဘောမကျလို့ ငြင်းရတာလဲ။
ငါက အဆောင်သူမို့လို့တဲ့ ကျွန်မသိချင်တာကို ငယ်ဖြေပေးပြီး တရှုတ်ရှုတ်ငိုနေပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဘာဆက်ပြောရမှန်း မသိတော့ အောင်ကို နှုတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် သွားမိတယ်။
မိန်းခလေး တစ်ယောက် အဆောင်သူ ဖြစ်နေခြင်းဟာ သားရှင်အတွက် ကိုယ့်သားနဲ့ သဘောမတူဖို့ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုပါလား။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းက နယ်ကနေ လာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းပါ။ ဆွေးမျိုးမရှိတဲ့နေရာမှာ အဆောင်နေရင်းနဲ့ ဘ၀ကို ရပ်တည်နေတာ အမှားတစ်ခု ကျူးလွန်မိတာပါလား။ ကျွန်မလည်း ရပ်ဝေးကနေ အဆောင်လာနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလို တိုးတကနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကိုယ့်ဘ၀ တက်လမ်းအတွက် အလားအလာအများကြီးရှိနိုင်တဲ့ မြို့ကြီးမှာ ရိုးရိုးသားသား အလုပ်လာလုပ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပျက်စီးနေကြပါတယ်လို့ ဘာကြောင့်များ ယူဆနေကြတာပါလဲ။ တကယ်တမ်း ပြောကြစတမ်းဆိုရင် မိသားစုမရှိဘဲ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ရပ်တည်၊ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ရပ်တည်၊ ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းပြီး ကြုံလာသမျှ အခက်အခဲ၊ ဖြစ်လာသမျှ ပြဿနာတွေကို ရဲရဲရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေရတဲ့ ကျွန်မတို့အဆောင် သူတွေဘ၀နဲ့ မိဘအရိပ်မှာခို၊ မိဘပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးလေးကို အလိုက်သင့်သုံး၊ အမေချက်ထားတာကို အရန်သင့် ထိုင်စားလို့ရတဲ့ အိမ်မှာ နေသူတွေရဲ့ ဘ၀၊ ဘယ်ဘ၀က ပိုခက်ခဲ ကြမ်းတမ်း တယ်ဆိုတာ အသိသာကြီးပါ။
ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲတဲ့ လူဖြစ်ပါစေ၊ မိသားစုနဲ့ အတူတူ နေရတယ်ဆိုတဲ့ တစ်ချက်တည်းက ကျွန်မတို့ထက် အဆများစွာ သာနေပါပြီ။ စိတ်ညစ်စရာကြုံလာရင် နှစ်သိမ့်ပေးမယ့်လူ၊ ဘယ်လိုကိစ္စမျိုး အတွက်မဆို အကြံဥာဏ် ကောင်းတွေ ပေးနိုင်မယ့်လူ၊ မတော်လို့ ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာရင်တောင် ကိုယ့်ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးမယ့် အဖေ အမေနဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ အနားမှာ သူတို့တွေရှိမနေပါဘူး။ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရမယ်ဆိုရင် စိတ်ဓာတ် ဘယ်လောက်မာတယ်ပဲ ပြောပြော အရာရာကို တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘ၀မှာ ကျွန်မတို့လည်း အားငယ်စိတ် ဖြစ်မိပါတယ်။ တကယ်လို့ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် ရပ်ဝေးမှာရှိနေတဲ့ မိဘတွေ စိတ်ဆင်းရဲမှာစိုးလို့ ရင်ဖွင့်ပြောပြတာမျိုး မလုပ်ကြဘဲ အတက်နိုင်ဆုံး မျိုသိပ်ထား တတ်ကြပါတယ်။
သူငယ်ချင်း၊ အပေါင်းအသင်း ဆိုတာကလည်း ကျောင်းသူဘ၀ကလောက် မများပြားတော့တာအမှန်ပါ။ တစ်နေကုန် အလုပ်သွား၊ ညနေစောင်းမှာ အဆောင်ပြန်ရောက်၊ လုပ်စရားရှိတာလေးတွေ လုပ်ပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေမှ မဆုံးခင် အိပ်ပျော်သွား ကြရတဲ့ ကျွန်မတို့တစ်တွေမှာ မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့ အချိန်ဆိုတာ အရှားသားလား။ ဒါဆို ရုံးကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ကရောလို့ မေးလိမ့်မယ်။ သူများတွေတော့မသိပါဘူး။ ကျွန်မရုံးမှာတော့ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းနယ်ကပါ။
ထမင်းဆိုရင်လည်း ကိုယ်ဝယ်မှ၊ ကိုယ်ချက်မှ ကိုယ်စားရတာပါ။ အ၀တ်ဆိုလည်း ကိုယ်တိုင်လျှော်ဖွပ်၊ အဆိုးဆုံးကတော့ နေမကောင်းရင်တောင် ဂရုတစိုက်နဲ့ ဆေးခန်းလိုက်ပို့ ပေးမယ်သူမရှိတာပါပဲ။ အိမ်မှာ မိသားစုနဲ့ နေသူတွေကတော့ သူတို့ဘ၀က အချုပ်အချယ်ခံဘ၀၊ ကျွန်မတို့က အရာရာ ကိုယ့်ခြေကိုယ့်လက်နဲ့မို့လို့ ကျွန်မတို့ဘ၀ကို သဘောကျကောင်း ကျကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လူ့အလို နတ်မလိုက် နိုင်တာလို့ပဲ ပြောရမလား။ ကျွန်မတို့ အဆောင်သူတွေကတော့ အချုပ်ချယ်ခံ ဘ၀ကို ပိုတောင့်တပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ဝေး၊ သူငယ်ချင်း နထ္ထိဆိုတဲ့ဘ၀မှာ ကျွန်မသူငယ်ချင်း ငယ်အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ခင်တွယ်မိတာကို လည်း အမှားလို့မဆိုသာပါဘူး။ စာနာတတ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀ကို နည်းလည်ပြီး ဖေးဖေးမမနဲ့ ထိန်းပေးရင် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်မိမှာပါ။ အခုတော့ အဆောင်သူဆိုတဲ့ အချက်ကို အားနည်းချက်အဖြစ် ထောက်ပြတာကတော့ ရေနစ်သူ ၀ါးကူးလို့ ထိုးနေသလိုပါပဲ။
တစ်ချို့တွေကလည်း ဆိုပါတယ်။ အဆောင်သူတစ်ချို့ဟာ နယ်ကလာတုန်းက ရိုးသားအေးဆေးကြပေမယ့် မိဘနဲ့ အဝေးမှာ အနေကြာလာတော့ ၀တ်တာစားတာကအစ ပျက်စီးလာကြတာကို ကိုယ်တွေ့ပါပဲတဲ့။ ဟုတ်မှာပါ။ မိဘနဲ့အဝေးမှာ လွတ်ပြီ ကျွတ်ပြီဆိုပြီး နေချင်သလို နေကြတဲ့ လူတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မြင်ဖူးတဲ့ အဆောင်သူ ပျက်စီးတာကို တွေ့ပြီး အလုံးစုံသော အဆောင်သူတွေ ပျက်စီးနေကြပါပြီလို့ လှေနံစားထစ် မသတ်မှတ် စေချင်ပါဘူး။ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ်ရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ကျွန်မတို့ မခံစားနိုင်ကြပါဘူး။
ကျွန်မရဲ့မေမေ တစ်ခါကပြောဖူးပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် သံကွန်ချာ ခုနှစ်ထပ်ကာထားတောင် မလုံခြုံနိုင်ဘူးတဲ့၊ မေမေ့ရဲစကားကို ကျွန်မ သဘောကျမိပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်တိုင်က အနေအထိုင် မဆင်ခြင်ရင် အဆာင်သူဖြစ်စေ၊ မိသားစုနဲ့အတူနေသူဖြစ်စေ ပျက်စီးမှာပါပဲ။ အဆောင်သူမို့လို့ မရမ်းပတာ ဖြစ်နေတယ်လို့ မဆိုနိုင်သလို မိဘအုပ်ထိန်းမှု အောက်မှာရှိတဲ့ မိန်းခလေးတိုင်းဟာလည် ဗိုင်းကောက် ကျောက်ဖိ ဖြစ်မနေနိုင်ပါဘူး။ အဓိက အချက်ကတော့ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းပဲ့ပြင်နိုင်ဖို့ပါပဲ။ ကျွန်မအခုလို ပြောပြနေတာတွေဟာ ကျွန်မသူငယ်ချင်း ငယ် တစ်ယောက်တည်း အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀ မြင့်တက်ဖို့ ရပ်ဝေးကနေ လာရောက်နေထိုင်ကြရတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ၀န်ထမ်းအဆောင်သူအားလုံးအတွက်ပါ။ ကျွန်မတို့ လိုအပ်နေတာက မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ ဖေးမကူညီမှု၊ စေတနာထား ဆိုဆုံးမမှုတွေပါ။ လှေနံဓားထစ် စွပ်စွဲချက်တွေ၊ ရှေးရိုးဆန်တဲ့ အယူအဆတွေမဟုတ်ပါဘူး။ မိဘနဲ့ အဝေးမှာ နေရတဲ့ ကျွန်မတို့တွေဟာ မိဘမဲ့တွေနီးပါး မေတ္တာငတ်မွတ်နေပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
၁၄-၁၁ ၂၀၀၈ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာတိုင်း(မ်) ကြေးမုံဝင်းရေးသားထားသော ဆောင်းပါးမှ ကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်
Posted by friend group at 1:21 PM0comments
လောကမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရာဆိုတာ ဘာလဲ…? အဖိုးတန် ရတနာပစ္စည်းတွေလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ သူဟာ လူတိုင်းနဲ့ အတူရှိနေပါတယ်။ သွားအတူတူ လာအတူတူ ဒွန်တွဲနေပါတယ်။
ကျွန်မအပါအ၀င် လူသားအားလုံး အချိန်ကို ဖြုန်းခဲ့ဖူးကြမှာပါ။ နည်းနည်းဖြုန်းခဲ့ဖူးသူနဲ့ များများဖြုန်းခဲ့ဖူးသူဘဲ ကွာပါမယ်။ အချိန်ကို အသုံးပြုတတ်သူတွေကတော့ အချိန်ကို အရင်းအနှီးတစ်ခု ပြုလုပ်ပြီး တရားရှာသူ၊ ပညာရှာသူ၊ ငွေကြေးရှာတတ်သူတွေ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အချိန်ကို တန်ဖိုးထားကြတဲ့သူတွေပေါ့။ စက္ကန့်တွေ၊ မိနစ်တွေ၊ နာရီတွေ၊ ရက်တွေ၊ လတွေ၊ နှစ်တွေကို မိမိက အသုံးမချလိုက်ရင် အဲဒီအချိန်တွေက မိမိကို ၀ါးမြိုသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေ့ကုန်သွားရင် နောက်တစ်ရက်၊ ဒီလကုန်သွားရင် နောက်တစ်လ၊ ဒီနှစ်ကုန်သွားရင် နောက်တစ်နှစ်ကူး သွားပြီးဆိုတာ အချိန် အတိုင်းအတာတွေရဲ့ သင်္ကေတတွေပါ။ ကျွန်မတို့ကို အမြဲ သတိပေးနေတာနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ကျွန်မတို့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်တွေမှာ အကျိုးရှိတဲ့အလုပ် ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြသလဲလို့ မိမိကိုယ်ကို မေးခွန်းတွေ ထုတ်မေးကြည့်ကြပါ။ ကျွန်မလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးမိပါတယ်။ အဖြေက ထွက်မလာဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အချိန်ဖြုန်းတဲ့ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေလို့ပါ။
`အချိန်´ဆိုတာ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ ငွေကြေးတွေ ပျောက်ဆုံးသွားတာ၊ အခြားပစ္စည်းတွေ ဆုံးရှုံးသွား တာတွေကို ပြန်ရှာနိုင်၊ ၀ယ်နိုင်ပေမယ့် အကျိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ဖြုန်းခဲ့တာကိုတော့ ပြန်ပြီးအစားထိုးလို့ မရတော့ပါဘူး။ အကျိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ဖြုန်းခဲ့တဲ့ နောင်တပဲ ရပါလိမ့်မယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိစေမယ့် အလုပ်ကလေးတွေရွေးပြီး ၀ီရိယနဲ့ လေ့ကျင့်သွားရင် ရပါတယ်။ မိမိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို အစီအစဉ်လေးဆွဲပြီး အာရုံစိုက်မှုနဲ့ စနစ်တကျ ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိရင် မိမိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်ကို အကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်သူဖြစ်လာမှာပါ။ အဲဒီလို အလေ့အကျင့် တွေရလာရင် မိမိလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေကို ပြန်ပြီး မြင်လာပါမယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ရက်က အချိန်ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ရမယ်။ ရည်ရွယ်ချက်မရှိ၊ ရည်မှန်းချက် မရှိဘဲ အချိန်တွေ အလဟဿဖြစ်ကုန်တာ အင်မတန် နှမြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ မိမိကိုယ်မှာ သတိလေး အမြဲကပ်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ အကျင့်ဖြစ်သွားရင် အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ပြုလုပ်ရမည့် အလုပ်တွေကို မလုပ်သေးဘဲ အချိန်ဆွဲတဲ့ အလေ့အထတွေကြောင့် မအောင်မြင်၊ မချမ်းသာသူတွေ များစွာရှိပါတယ်။
အချိန်လွန်မှ အလုပ်လုပ်ရင် စိတ်ပင်ပန်း ဆင်းရဲမှုများနဲ့ ကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံး သူ့အချိန်နှင့် အလုပ်ကို ပြီးပြတ်စွာလုပ်မှ စိတ်ချမ်းသားမှု အမှန်တစ်ကယ် ရရှိမှာပါ။ မိမိကအချိန်ကို မလေးစားရင် အချိန်က မိမိကို ပြန်ဒဏ်ခတ်ပါလိမ့်မည်။
အချိန်ဆိုတာ ပညာရှိတွေအတွက်တော့ အဖိုးတန်တဲ့ အရာပါပဲ။ အချိန်ကသစ္စာလည်းရှိတယ်။ ကတိလည်း တည်တယ်။ အချိန်ကို အရင်းအနှီးလုပ်ကြည့်ပါ။ အချိန်နည်းနည်းလုပ်ရင် နည်းနည်းအကျိုးရှိပြီး အချိန်များ များအလုပ်လုပ်ရင် များများအကျိုးရှိပါတယ်။ အချိန်နှင့်ဒီရေသည် လူကိုမစောင့်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်နေသောသူများမှ မဟုတ်ပါဘူး အိမ်မှုကိစ္စများကို နေ့ဒဓူဝပြုလုပ်နေရသည့် အိမ်ရှင်မများသည် လည်း ကိုယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်ရမည့် အိမ်မှုကိစ္စများကို အချိန်ဆွဲထားလျှင် မိမိသာ ပင်ပန်းပေလိမ့်မည်။ နည်းနည်းရှိ တဲ့အလုပ်ကို အချိန်မဖြုန်းဘဲ အကျိုးရှိစွာ အသုံးချကြည့်ပါ။ သူငယ်ချင်းတို့အားလုံး လောက၌တန်ဖိုးအရှိဆုံး အရာဘာလဲဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မလည်း စာအုပ်တစ်အုပ်မှ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်အကြောင်းကို ကျွန်မဖတ်ခဲ့ရသည့်အတွက် အချိန်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတတ်လာသလို သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးလည်း ကျွန်မနှင့်ထပ်တူ အချိန်ကိုလေစားတန်ဖိုးထားတတ်စေရန် ထိုစာအုပ်မှ အချို့တစ်ဝက်ကို ကောက်နုတ်၍ ကိုးကားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted by friend group at 1:13 PM0comments
အေးချမ်းတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့မှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးရှိတယ်။ သူတို့ဟာ အမြဲမခွါ တစ်တွဲတွဲပဲ နေ့တိုင်းပင်လယ်ဘေးကို သွားပြီး နေထွက်၊ နေ၀င်ချိန်ကို သွားကြည့်ကြတယ်။ သူတို့က မြင်သူတကာ အားကျတဲ့ စုံတွဲလေးပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာ မတော်တဆ ကားတိုက်မှုကြောင့် ကောင်မလေး အပြင်းအထန် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရပြီး မေ့မျှောသွားခဲ့တယ်။ အိပ်ရာထဲမှာပဲ ငြိမ်သက်စွာ လဲလျောင်းနေရတယ်။ နေ့ဖက်ဆိုရင် ကောင်လေးက ကောင်မလေးနားမှာ နေပြီးသူ့နာမည်ကို တတွတ်တွတ်ရွတ်ခေါ်တယ်။ ညဖက်ဆိုရင် ဘုရားကျောင်းသွားပြီးကောင်မလေးကျန်းမာလာစေဖို့ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်း တယ်။ အချိန်တွေ တဖြေးဖြေး ကုန်လွန်သွားခဲ့ပြီး ကောင်လေးခများ ငိုရလွန်းလို့ မျက်ရည်တွေ တောင်ခမ်းလုနီးနေပြီ။ ကောင်မလေးက မေ့မျှောနေဆဲပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကောင်လေး လက်မလျှော့ ခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းမြဲ ဆုတောင်းတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ညမှာ ဘုရားသခင်က ကောင်လေးရဲ့ မလျှော့တဲ့ ဇွဲနဲ့ကောင်မလေး အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားကြောင့် သူ့အပေါ် သနားသက်ဝင် ပြီးမျှော်လင့်ချက် တစ်ခုပေးလိုက်တယ်။ ဘုရားသခင်က ကောင်လေး ကို"ကောင်မလေးရဲ့ အသက်ကို ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ လှဲလှယ်နိုင်မလား"လို့မေးတယ်။ ကောင်လေးက တွေဝေမနေဘဲ လှဲလှယ်နိုင်ကြောင်း ချက်ချင်း ပြန်ဖြေတယ်။ "ဒါဆို ကောင်းပြီ။ ကောင်မလေး အမြန်နှိုးလာဖို့ အသင် ပုစဉ်းဘ၀နဲ့ သုံးနှစ်အသွင် ပြောင်းရမယ်။ သဘောတူနိုင်လား" လို့ ဘုရားသခင်က မေးပြန်တယ်။ ကောင်လေးက မဆိုင်းမတွဘဲ သဘောတူကြောင်း ချက်ချင်း ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
မိုးလင်းတာနဲ့ ကောင်လေးဟာ ပုစဉ်းတစ်ကောင် အသွင်ပြောင်း သွားခဲ့တယ်။ ပုစဉ်းလေးက ဆေးရုံဖက်ကို အလျှင်အမြန် ပျံလာတယ်။ လူနာခန်းထဲ ၀င်ကြည့်တော့ကောင်မလေးက နှိုးနေပြီး ဆရာဝန်တစ်ဦးနဲ့ စကားပြောနေတာကို တွေ့တယ်။ သူတို့ပြောနေတာတွေကို ပုစဉ်းက မကြားရဘူး။ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်နေတော့ ကောင်မလေး ကျန်းမာလာပြီး ဆေးရုံက ဆင်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမပျော်ဘူး။ နေရာအနှံ့ ကောင်လေးကို လိုက်စုံစမ်းတယ်၊ လိုက်ရှာတယ်။ ကောင်လေး ဘယ်ပျောက်သွားမှန်း ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။ ကောင်လေးက ပုစဉ်းအသွင်နဲ့ ကောင်မလေး ဘေးမှာ ရစ်ဝဲ ပျံသန်းနေပေမဲ့ ကောင်မလေးကို သူခေါ်လို့ မရဘူး။ပွေ့ဖက်လို့ မရဘူး။ ကောင်မလေးကိုပဲ ငေးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နွေရက်တွေ တဖြေးဖြေး ကုန်လွန်ပြီး ဆောင်းဦးကို ရောက်လာခဲ့တယ်။ ဆောင်းလေညင်းတွေကြောင့် သစ်ရွက်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေကုန်တယ်။ ပုစဉ်းလေး ဒီနေရာက ခွာရတော့မယ်။ နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြင့် ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးထက်နားကို သူအရဲစွန့်ပြီး သွားနားလိုက်တယ်။ နူးညံ့တဲ့ တောင်ပံနဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ပါးပြင်ကို ထိလိုက်တယ်။ သေးငယ်တဲ့ ပါးစပ်နဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ပုခုံးသားကို ရှိုက်နမ်းလိုက်တယ်။ ကောင်မလေး သတိမထားမိခင်မှာ သူတိတ်တဆိတ် ထပျံလာခဲ့တယ်။ မျက်စိတမှိတ် အတွင်းမှာပဲ နွေဦးရာသီကို ရောက်လာခဲ့ တယ်။ နွေရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ ပုစဉ်းဟာ ကောင်မလေးနားကို အရောက်ပျံသန်း လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူရင်းနှီးတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ ဘေးမှာခန့်ညားတဲ့ သူစိမ်းကောင်လေး တစ်ယောက်ကိုသူ တွေ့လိုက်တော့ ပျံသန်းနေတဲ့ သူ့တောင်ပံတွေ လေဟာနယ် တ၀က်တပျက်မှာ အရပ်တန့်ခံလိုက်ရတယ်။ လူတွေက ကောင်မလေး ကားတိုက်ခံရတာ ဒဏ်ရာတွေ ဘယ်လောက် ပြင်းထန်ကြောင်း၊ ဒဏ်ရာတွေကို ကုသပေးတဲ့ ဆရာဝန်ဟာ ကောင်မလေးအပေါ် ဘယ်လောက် ဂရုစိုက်ကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့ အချစ်တွေက စံတင်ထိုက်တဲ့ အကြောင်း၊ ကောင်မလေး ဘ၀က အရင်လို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ နေပြီဖြစ်တဲ့ အကြောင်း ပြောသံတွေကို ပုစဉ်းကြားလိုက်ရတယ်။ ပုစဉ်း ရင်ကွဲရပြန်တယ်။ ဆရာဝန် ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး ပင်လယ်ဘေးသွားပြီး နေ၀င်၊ နေထွက်ကြည့်တာကို သူအမြဲတွေ့နေရပေမဲ့ တစ်ခါတလေ ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးထက်မှာ ခဏသွားနားတာက လွဲလို့သူဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ပုစဉ်းလေးဟာ ရင်ထဲက ဝေဒနာတွေကို ကြိတ်မှိတ်ခံစားရင် ဒီနှစ်နွေဟာ ခါတိုင်းနွေထက် ပိုရှည်လျှားနေတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ကောင်မလေးနားမှာ ရစ်ဝဲပျံသန်းဖို့လည်း သူမှာ ခွန်အားတွေ ဆုတ်လျော့နေတယ်။ ဆရာဝန် ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ တီးတိုးစကား ပြောသံနဲ့ ရယ်သံတွေက သူ့ကို အသက်ရှုကျပ်စေတယ်။ သုံးနှစ်မြောက် နွေရာသီမှာတော့ ပုစဉ်းဟာ ကောင်မလေးကို ခဏခဏ သွားမကြည့်တော့ဘူး။ သူနားနေကျ ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးကို ဆရာဝန် ကောင်လေးက တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပွေ့ဖက်ထားတယ်။ သူ့တောင်ပံနဲ့ ထိနေကျ ကောင်မလေးရဲ့ပါးပြင်ဟာလည်း ဆရာဝန်ကောင်လေးက တယုတယနမ်းနေတယ်။ ပုစဉ်းရင်ကွဲ တစ်ကောင်က သူ့တို့ဘေးမှာ ရစ်ဝဲနေတယ် ဆိုတာကို ချစ်တင်းနှောပြီး ကြည်နှုးနေတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက် သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်မလေးကလည်း အတိတ်ဆိုတာကို လုံးဝသတိ မေ့သွားခဲ့ပြီလေ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ (၃)နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကို ရောက်ဖို့ တစ်ရက်အလိုမှာ ကောင်မလေးနဲ့ ဆရာဝန် ကောင်လေးတို့ လက်ထပ် လိုက်ကြတယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲသူပျံဝင်ပြီး ကောင်မလေးရဲ့ ပုခုံးထက်မှာ နားလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးနဲ့ ဆရာဝန် ကောင်လေးရဲ့ ဘုရားသခင်ထံ သစ္စာခံယူနေတဲ့ အသံကို သူကြားလိုက်တယ်။ ဆရာဝန် ကောင်လေးက ကောင်မလေးရဲ့ လက်ကို လက်ထပ်လက်စွပ် စွပ်ပေးပြီး နမ်းလိုက်တာကို သူငေးကြည့် နေမိတယ်။ သူ့ပါးပြင်ငယ်ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေ
"အသင် နောင်တရပြီလား" ဘုရားသခင်က ပုစဉ်းကို မေးတယ်။"နောင်တ လုံးဝမရပါဘူး" မျက်ရည်တွေကို သုတ်ရင်း သူပြန်ဖြေတယ်။"မနက်ဖြန်ဆို လူ့ဘ၀အသွင် ပြောင်းလို့ရပြီ" ဘုရားသခင်က ပြောတော့ ပုစဉ်းကခေါင်းခါပြီး "ပုစဉ်းအဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော်တစ်သက်လုံး နေပါရစေတော့။တစ်ချို့ကံတရားက လက်လွတ်ဆုံးရှုံးဖို့ စီရင်လာပြီးသားပါ။ တစ်ချို့ဖူးစာက
ပေါင်းစပ်ဖို့ ကံပါမလာခဲ့ဘူး။ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တာ ရယူပိုင်ဆိုင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ရယူပိုင်ဆိုင်ပြီးရင်တော့ကောင်းကောင်း တန်ဖိုးထား ချစ်တတ်ရမယ်"
Posted by friend group at 10:16 AM0comments
ဟိုတုန်းကတော့ သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြားတဲ့ အခု ၂၀ ရာစု I.T ခေတ်ကြီးထဲရောက်လာတော့ အဲသည် ဆိုရိုးစကားက ပြောင်းသွားပြီ။ သက်ကြီးစကား သက်ငယ်မကြား ဖြစ်သွားပြီ။
အိမ်မှာကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးသူတွေရှိတယ်။ အဖေ၊အမေဖြစ်မယ်။ အစ်ကို၊အစ်မဖြစ်မယ်။ ဦးကြီး၊ဦးလေး။ ဒေါ်ကြီး၊ဒေါ်လေး….။ တစ်ဝမ်းကွဲညီအကို မောင်နှမ….။ နောက်ပြီး ဆွေမျိုးနီးစပ် ရပ်ဆွေရပ်မျိုး…. အသက်ကြီး တွေရှိတယ်။ အိမ်ကအရောင်းအ၀ယ် ရှိတဲ့အိမ်။ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းရှိတဲ့ အိမ်ဆိုပြန်ရင်လဲ။ ဆက်စပ်နေတဲ့ လူတွေ ၀င်မယ်ထွက်မယ်။ ကိုယ်ထက် အသက်ကြီးသူတွေပေါ့။ သူတို့အချင်းချင်း စကားပြောကြမယ်။ စကားဝိုင်းဖွဲ့ကြ မယ်။ အကြောင်းအရာမျိုးစုံ။ ကြုံရာဆုံရာ စုမိတဲ့အခါ ပြောကြမယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုအသက်ကြီးတွေ ပြောကြတဲ့ စကားတွေကို သက်ငယ်ကကြားဘို့ အခွင့်အရေး တစတစလျော့ပါး လာတယ်။ ဒါကြောင့် သက်ကြီးတွေ ပြောနေကြသော်ငြား သက်ငယ်များအနေနဲ့ ကြားခွင့်နာခွင့်က မကြုံနိုင်တော့ဘူး။ ကြားရဘို့ အခွင့်အရေးက တော်တော်နည်းသွားပြီ။ စုတုပြုဆိုတဲ့ အနေအထားမှာ စုအဆင့်ကို မရောက်နိုင်ဘူး။ သက်ကြီးစကားကို သက်ငယ်က ကြားဘို့ အခွင့်မသာတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့်လဲဆိုတော့ မျက်စိနှစ်လုံးပွင့် ကတည်းက ပညာရေးကိစ္စအတွက်ပဲ အာရုံစိုက်နေရတာလေ။ ကျူရှင်အစောကြီး သွားရတယ်။ (၈)နာရီခွဲ လောက်ပြန်လာ။ ကျောင်းကြီးတက်ရတယ်။ ညနေပြန်လာ ကျူရှင်ပဲ ကမန်းကတန်း ရေမိုးချိုး၊ ထမင်းစား ပြေးပြေးလွားလွား။ Guite ဆရာနဲ့ စာကျက်ဝိုင်း (၁၀)နာရီ (၁၁)နာရီအိပ်။ နောက်နေ့ ဒီအတိုင်းပဲ။ နောက်တစ်ပါတ်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ စာမေးပွဲတွေ ကြိုပြီးဖြေကြည့်ကြ။ ဆရာတွေက စပါယ်ရှယ် စခန်းသွင်းကြ။ ပထမအစမ်း ပြီးပြီဆိုကတည်းက စာမေးပွဲကြီးအတွက် အားလုံးအသင့်ပြင်ထားကြ။ (တချို့က နောင်နှစ်တက်ရ မယ့် အတန်းအတွက် ကြိုတင်ငွေပေးထားကြရ)
ဒီတော့ အိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်က နည်းလာတယ်။ နေရသခိုက်မှာလည်း T.V ရှေ့ထိုင် P.C ရှေ့ထိုင်ပေါ့ လူကြီး တွေစကားပြောတဲ့အနားမှာ ရစ်ဝဲရစ်ဝဲနဲ့ ယောင်နေလို့မရဘူးပေါ့။ စာကျက်စရာတွေက တပုံကြီးစောင့်နေတယ်။ လေ့ကျင်ခန်းတွေက အများကြီးလုပ်ရအုံးမယ်။ အိမ်မှာ လူကြီးတွေပြောကြဆိုကြတာဟာ ကိုယ့်နားထဲ မ၀င်တော့ ဘူး။ လူကြီးအချင်းချင်းပြောတာဆိုတာ ကိုယ်မကြားနိုင်တော့ဘူး။ သက်ကြီးစကားပေမယ့် သက်ငယ်မကြားနိုင် တော့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပရိစ္ဆေဒရှည်ကြာစွာ သက်ကြီးစကားကို သက်ငယ်တွေ မကြားပဲနေခဲ့ရတဲ့ သက်တမ်းဟာ ဆယ်နှစ် ဆယ့်ငါးနှစ် အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်တော့ ရှိရော့မယ်။ သက်ငယ်တွေဟာ သက်ကြီးတွေဆီက ကြားသင့်ကြား ထိုက်တာတွေ မကြားခဲ့ရပဲ ကြီးပြင်းလာပြီး သက်ကြီးဘ၀ကို ရောက်လာပြန်တော့လည်း သူတို့ရဲ့ သက်ငယ်တွေ ဟာ သူတို့စကားကို မကြားသာတဲ့ အနေအထားပဲ ဖြစ်နေပြန်ရော။
ဒီလိုနဲ့ သက်ကြီးစကား သက်သယ်ကြားဘ၀ကနေ သက်ကြီးစကား သက်ငယ်မကြားဘ၀ကို ပြောင်းမှန်းမသိ ပြောင်းခဲ့ကြရပါသတဲ့လေ။
သူငယ်ချင်းတို့အား ကျွန်မဖတ်ရသော စာရေးသူ `သင့်နော်´ ရေးသားထားသည့် စာပိုဒ်မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။
Posted by friend group at 11:24 AM0comments
ဘဝကို ကျောက်တုံးလို တွန်းတင်ပြီး
ရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်ဖို့နဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ အဆင်ပြေသာယာဖို့ နည်းလမ်း (၈)သွယ်
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့နဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖို့ ဆန္ဒ တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းတော့ ဒီနှစ်ချက်လုံး အောင်မြင်ဖို့ မလွယ်ကူ လှပါဘူး။
ရည်ရွယ်ချက်တွေ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားရင်း နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာ အခက်အခဲတွေ အဆင် မပြေမှုတွေ မပျော်ရွှင်မှုတွေ ကြုံတွေ့နေရသူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကို ဘယ်လို ကျော်လွှားနိုင်သလဲ။ အလွယ်တကူကျော်လွှားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ လူတိုင်းသိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကျင့်ဖို့တော့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အရိုးဆုံးဟာ အဆန်းဆုံးဖြစ်ပြီး အလွယ်ဆုံးဟာ အခက်ခဲဆုံး ဖြစ်နိုင် လို့ပါပဲ။
ကဲရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်ဖို့နဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အဆင်ပြေသာယာဖို့ ကျင့်သုံးရမယ့် နည်းလမ်း (၈) သွယ်ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
၁။ စိတ်တည်ငြိမ်အောင် တရားအားထုတ်ပါ။ တရားအားထုတ်ပါဆိုလို့ တွန့်မသွားပါနဲ့။ မနက် စောစော အိပ်ယာမထခင် ဆယ့်ငါးမိနစ်ကနေ နာရီဝက်ခန့်အထိ စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင် အားထုတ်ပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ စိတ်နှလုံးကို အတည်ငြိမ်ဆုံးထားပြီး အာရုံစုစည်းထားပါ။ ဒါဟာ ဘာကို အကျိုးပြုသလဲဆိုရင် ကြည်လင်တဲ့ စိတ်နှလုံးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်ချမှတ်နိုင်ဖို့၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ အကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ အစားအစာကို ချင့်ချိန်စားပါ။
သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပဲ၊ မြေပဲ၊ သံလွင်ဆီစတဲ့ အယ်လ်ကာလီ ပါဝင်မှုမြင့်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်မြင့်တဲ့ ဂျုံ၊ အသား၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းနဲ့ သကြားတွေကို အချိုး အစားမျှတအောင် စားသောက်ရပါမယ်။ ဒါမှ မျှတတဲ့ စားသောက်မှု ပုံစံနဲ့ ရောဂါကင်းပြီး ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါမယ်။
၃။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့် အရာများကိုရှောင်ပါ။
အရက်၊ စီးကရက်၊ ကဖိန်းဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ၊ သကြားနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး စတာတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါတွေက သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့ စိတ်စွမ်းအင်တွေကို ယုတ်လျော့စေပါတယ်။ လူငယ်တွေအတွက် ဒီအရာတွေဟာ အထူး ရှောင်ရှားရမယ့် အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။
၄။ တေးဂီတကို နားဆင်ပါ။
ဂီတဟာ စိတ်ကိုကြည်နူးလန်းဆန်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြမ်းတမ်းတဲ့ အနိဋ္ဌာရုံ စာသားတွေပါတဲ့ သီချင်းမျိုးကိုရှောင်ပြီး စိတ်အေးချမ်းစေမယ့် သီချင်းမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်ရ ပါမယ်။ ဒါမှ ဂီတနဲ့ သင့်ရဲ့စိတ်ဝိဥာဉ်ကို နှစ်သိမ့်အားဖြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
သင့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို စိတ်ခွန်အားပြည့်မယ့်၊ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းမယ့် ပတ်ဝန်းကျင် လေးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။ ဒါမှ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ ခွန်အားတွေကို အိမ်မှာ အပန်းဖြေရင်း ပြန်လည်မွေးမြူနိုင်မှာပါ။
၆။ တီဗွီကြည့်ရှုမှုကို လျှော့ချပါ။
အချိန်ကြာမြင့်စွာ တီဗွီကြည့်ရှုခြင်းအစား စာဖတ်ခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲ ခြင်းစတဲ့မိမိဝါသနာပါရာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာတစ်ခုနဲ့ အစားထိုးသင့်ပါတယ်။ သင်စိတ်ပါဝင် စားတဲ့ဝါသနာ ပါတဲ့အရာကို လုပ်နေခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့စိတ်ညစ်ညူးမှုတွေ ပြေပျောက်သွား နိုင်တယ်လေ။
၇။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ စိတ်ခွန်အားကို တိုးမြှင့်ပါ။
ဓာတ်ပုံတွေဟာ စိတ်ခွန်အားတွေနဲ့ ငယ်သူငယ်သွေးတွေကို သယ်ဆောင်ယူလာပေး နိုင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်၊ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်၊ အောက်မေ့သတိရဖွယ် ဓာတ်ပုံတွေကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သင့်စိတ်မှာ ကြည်နူးနှစ်သိမ့်မှု ရစေနိုင်ပါတယ်။
၈။ အသိအကျွမ်း၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို အလေးထားပါ။
သင့်ရဲ့အနီးအနားမှာ သင့်ကိုအထင်ကြီး လေးစားတဲ့၊ သင်ကလည်း လေးစားခင်မင်တဲ့၊ စိတ်နှလုံးချင်း နီးကပ်တဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင်တွေ ရှိနေပါစေ။ ဒါဟာ သင့်အ တွက် စိတ်ချမ်းသာလုံခြုံမှု ဖြစ်စေနိုင်သလို သင့်ရဲ့ အလေးထားမှုကြောင့် သင်နဲ့ သူတို့ကြားမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုမယ့် အရာတွေပါပဲ။
ဒီအရာတွေဟာ လက်တွေ့လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ဖို့ လွယ်ကူရိုးစင်း လှပါတယ်။ မြန်မာစကားမှာ ဆေးကောင်းရင် ဖြုတ်ခေါင်းလို့ ဆိုရိုးရှိပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့နဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ ငွေတွေအရမ်းရှာနေစရာ၊ အလုပ်တွေ တအားကြိုးစား နေစရာ မလိုပါဘူး။ အထက်ပါ အချက်(၈)ချက်ကို လက်တွေ့လိုက်နာကြည့်ရင် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး ဘဝဟာ နေပျော်စရာ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါဆို ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝ အချိန်တွေကို စိတ်နှလုံးသာယာစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီ မဟုတ်ပါလား။
Dr. Wayne W Dyer ၏7secret ofajoyful life မှ ထုတ်နှုတ်မှီးငြမ်းသည်။
Posted by friend group at 11:05 AM0comments
မင်းကို တွေ့ဖို့ ငါကြောက်နေခဲ့တယ်
မင်းနဲ့ တွေ့တဲ့ အချိန်မှာ
မင်းကို ချစ်မိမှာကို ငါကြောက်နေခဲ့တယ်
အခု မင်းကို ချစ်မိတဲ့အချိန်မှာ
Posted by friend group at 4:05 PM0comments
တန်ဆောင်မုန်းလသည် မိုးနှောင်းပိုင်း ဆောင်းဦးပိုင်း ကြားကာလဖြစ်၍ ရာသီဥတု သာသာယာယာရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလအကြောင်းကို တန်ဆောင်မုန်း ဗြိစ္ဆာ၊ ကြိတ္တီကာ၊ ရောင်ဝါရှိန်လို့ဖြိုး၊ ခဝဲပွင့်ချိန်၊ ခင်းကထိန်၊ ရွှေအိမ်ပိုင် လည်စိုးဟု ကင်းဝန်မင်းကြီးက သံပေါက်လင်္ကာဖြင့် ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလကို ဗေဒင်အခေါ်အဝေါ်အရ ဗြိစ္ဆာရာသီဟုခေါ်သည်။ ရာသီရုပ်မှာ ကင်းမြီးကောက်ရုပ်ဖြစ်သည်။ ရာသီပန်းမှာ ခဝဲပန်းများဖြစ်သည်။
မြန်မာလူမျိုးတို့သည် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲတော်ကို ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပကြပါသည်။ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့သည် ဤလတွင် သံဃာ့ဂုဏ်ကို အာရုံပြုလှူဒါန်းရသော ပရမတ်အလှူမျိုးဖြစ်သည့် ကထိန်ပွဲတော်ကို ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် တစ်ဦးချင်း ကထိန်အလှူထက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်များကို ပိုမိုကျင်းပလာခဲ့ပါ သည်။ ရပ်ကွက်အလိုက်၊ ကျေးရွာအလိုက်၊ အသင်းအဖွဲ့အလိုက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်များကို လှူဒါန်းကြရာ သံဃာတော်များမှာ ကထိန်ပွဲများသို့ မအားလပ်အောင်ပင် ကြွနေကြရပါသည်။ ကထိန်ပွဲတွင် အလှူပစ္စည်းများ သာမက အလှူရှင်များ၏ အလှူဒါနအတွက် ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာ ကခုန်ကြည်နူးနေကြသည့် အလှူမြင်ကွင်းများကိုလည်း တွေ့ရပါသည်။
တန်ဆောင်မုန်းလ၏ ထူးခြားသောပွဲတော်တစ်ခုမှာ မသိုးသင်္ကန်းရက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သံဃာတော်များကိုယ်တိုင် သင်္ကန်း များကို ချုပ်လုပ်ဝတ်ကြသည့်ကာလတွင် ကထိန်သင်္ကန်း၊ မသိုးသင်္ကန်းဟူ၍လည်း ခေါ်ကြပါသည်။ ကထိန်ခင်းရန် လှူဒါန်းမည့်သင်္ကန်းကို ညအိပ်မထားဘဲ ထိုနေ့ အရုဏ်မတက်မီအတွင်း နေ့ချင်းပြီးအောင် လုပ်ဆောင်သည့် သင်္ကန်းမြို့ကို မသိုးသင်္ကန်းဟု ခေါ်ပါသည်။ မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်ကလည်း မသိုးသင်္ကန်းရက်လုပ်ပွဲများ ကျင်းပကြပါသည်။ ကိုလိုနီ ခေတ်တွင် မသိုးသင်္ကန်းရက်လုပ်မှုများ ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။ မြန်မာ့မသိုးသင်္ကန်း ရက်လုပ်ပြိုင်ပွဲများလည်း တိမ်မြုပ် သွားသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် မသိုးသင်္ကန်းရက်လုပ်ပြိုင်ပွဲများ ပြန်၍ ထွန်းကားလာသည်။ ဤပွဲမှာ ထွန်းကား သင့်သော မြန်မာ့ရိုးရာပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်ပါသည်။
တန်ဆောင်မုန်းလသည် ပွဲတော်များဖြင့် ပြည့်လျှံလျက်ရှိသည့်လ ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်များတွင် ကထိန်သင်္ကန်း၊ မသိုးသင်္ကန်း၊ ပံ့သကူသင်္ကန်းများအပြင် ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်တွင် ကြာသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲများလည်း ကျင်းပ ပြုလုပ်ကြပါသည်။ တကယ့်ကြာမျှင်များကို သင်္ကန်းရက်၍လည်းကောင်း၊ ပိတ်သင်္ကန်းပေါ်တွင် ကြာပွင့်များ တန်ဆာဆင်၍ လည်းကောင်း ပူဇော်ကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလ၏ အခြားပွဲတော်တစ်ခုမှာ မီးထွန်းပွဲတော် ဖြစ်ပါသည်။ ကြိတ္တီကာ နက္ခတ်စောင့် နတ်သားသည် တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ရောက်လေတိုင်း လူ့ပြည်သို့ ဆင်းသက်လေ့ရှိသည်ကို မင်းနှင့်ပြည်သူ များက မီးထွန်းပူဇော်သည်။ ထို့ကြောင့် တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ယခုခေတ် မီးထွန်းပွဲတော်သည် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ ပိုဆန်လာသည်။ ဘုရားလောင်း၏ဆံတော်ကို ဌာပနာပြီး တာဝတိံသာတွင်တည်ထားသော စူဠာမဏိစေတီကိုရည်မှန်း၍ ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော်တွင် မီးလုံးများ၊ မီးပုံးများချိတ်ဆွဲခြင်း၊ ဖယောင်းတိုင်များထွန်းညှိခြင်းဖြင့် အလှဆင်ကြသည်။ ကလေးများကလည်း ရောင်စုံ မီးပန်း များ၊ မီးရှူးများ ပစ်လွှတ်ကစားခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်ကြသည်။
တန်ဆောင်တိုင်ကာလသည် စပါးပေါ်ချိန်ဖြစ်၍ တောင်သူလယ်သမားများ ငွေရွှင်သောကာလ ဖြစ်သည်။ အားလပ်သောကာလဖြစ်သည်။ တောရောမြို့ပါမကျန် မီးရောင်စုံ၊ လူရောင်စုံများဖြင့် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ် ဖြစ်သည်။ မြို့များတွင် ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်အလိုက် အကအဖွဲ့များ၊ ယိမ်းအဖွဲ့များ၊ တေးဂီတအဖွဲ့များ၊ ပြဇာတ်များ၊ တေးသရုပ်ဖော်များ စသည့် ပွဲလမ်းသဘင်များဖြင့် စည်ကားလှသည်။
တန်ဆောင်တိုင်ကာလတွင် အခြားကျင်းပလေ့ရှိသော အလှူဒါနပွဲတစ်ခုမှာ နိဗ္ဗာန်ဈေးဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်အလိုက်၊ လမ်းအလိုက် မိမိလှူဒါန်းလိုသော လှူဖွယ်ပစ္စည်းကိုပြင်ဆင်၍ အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး ဝင်ရောက်အလှူခံစားသုံး နိုင်သော အလှူပွဲများဖြစ်သည်။ တစ်အိမ်ပြီးတစ်အိမ် ဝင်ရောက်၍မုန့်မျိုးစုံကိုစားသောက်ခွင့်ရသည့် အင်မတန်ထူးခြားသော အလှူအတန်း ပုံစံမျိုးဖြစ်၍ ချစ်စရာလည်းကောင်း တန်ဆောင်မုန်းလသည် ထူးခြားသည့်ဝိသေသလက္ခဏာများ ထုံမွှန်း နေသောလလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကြိတ္တီကာ နက္ခတ်စန်းယှဉ်သော တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင် ဆေးပင်စောင့် နတ်အပေါင်း တို့သည် မယ်ဇလီပင်စောင့်နတ်မင်းအား လာရောက်ခစားကြသည်။ ထို့ကြောင့် မယ်ဇလီပင်သည် ဆေးပေါင်းခသည်။ ထိုမယ်ဇလီဖူးကို သုပ်စားခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှည်သည်၊ အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု အယူရှိသည်။
အချို့အရပ်ဒေသများတွင် မဲဇလီဖူးလေးများကို ပြုတ်၊ ကြက်သွန်စိမ်း၊ ပဲမှုန့်၊ ဆီချက်၊ ဆား၊ ငရုတ်သီးစိမ်းနှင့် သံပုရာရည်တို့ဖြင့်သုပ်ကာ အိမ်နီးချင်းများကို လိုက်လံဝေငှသည့် ချစ်စဖွယ်ဓလေ့လေးကို တွေ့ရပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ တစ်ကိုယ်ကောင်းမဆန်သော၊ မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ပေးကမ်းတတ်သောစေတနာကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။
တန်ဆောင်တိုင်၏အခြားပွဲတစ်ခုမှာ ကျီးမနိုးပွဲ ဖြစ်သည်။ ကျီးမနိုးပွဲကာလမှာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ လူများအိပ်ချိန်မှ အရုဏ်မတက်မီကာလထိ ဖြစ်သည်။ ကျီးမနိုးပွဲမှာ ရပ်ကွက်တွင်းရှိ ပြုပြင်သင့်သူများကို ပြုပြင်ရန် စာများရေးသားခြင်း၊ နောက်ပြောင်ကျီစယ်လိုစိတ်ဖြင့် ပစ္စည်းများကို ရွှေ့ပြောင်းထားခြင်း စသည်ဖြင့် ရိုးသားစွာ နောက်ပြောင်ကျီစယ်သည့်ပွဲ ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ် ကျီးမနိုးပွဲတွင် သရုပ်ပျက် စည်းကမ်းပျက်ရုံသာမက ကျီးမနိုးပွဲကို မှီ၍ ဒုစရိုက်သမားများက ဒုစရိုက်မှုများ ကျူးလွန်ကြသဖြင့် လူအများမနှစ်သက်တော့ဘဲ တဖြည်းဖြည်း တိမ်ကောစ ပြုလာပါသည်။
တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ရပ်ထဲရွာထဲတွင် မီးပုံးပျံပြိုင်ပွဲများ ပြုလုပ်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီး မြို့တွင် မီးပုံးပျံပွဲကို ရိုးရာဓလေ့တစ်ခုအနေဖြင့် အကြီးအကျယ် ပြုလုပ်ကျင်းပပြီး ဆုငွေများ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဂုဏ်ပြုလျက်ရှိရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူ များပြါးလှပြီး ရိုးရာမီးပုံးပျံဓလေ့ကို ရှုမငြီးနိုင်အောင် တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလ၏ ပွဲလမ်းသဘင်ပေါများပုံများ အဘိုးကြီးအို ခါးကုန်းကုန်း မသေပါနဲ့ဦး၊ နောက်နှစ်ခါ တန်ဆောင်မုန်း ပွဲကြည့်ပါဦးဟူသော ငယ်စဉ်က ရွတ်ဆိုခဲ့သည့် ကဗျာစာသားလေးကိုကြည့်လျှင် သိနိုင်ပါသည်။ မြန်မာ့အသံ မှ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် လတန်ဆောင်တိုင် ဟူသောသီချင်းကလည်း တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ရှိ လှုပ်ရှား နေသောပုံရိပ်များကို အားကူပေးလျှက် ရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကလေးများကလည်း ကလေးအလျှောက် မီးရှူး မီးပန်းများ ထွန်းညှိရင်း ပျော်ရွှင်ကြသည်။ လူငယ်များကလည်း လူငယ်အလျှောက် ပွဲလမ်းသဘင်များ လည်ပတ် ကြည့်ရှုရင်း ပျော်ရွှင်ကြသည်။ လူကြီးများကလည်း အလှူဒါနပြုလုပ်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် တန်ဆောင်မုန်းလရှိ မြန်မာ့ရိုးရာ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်များသည် ရိုးရာဓလေ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ သဒ္ဓါတရားနှင့် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဖွယ်ပုံရိပ်များကို ကောင်းမွန်စွာ ဖော်ဆောင်နိုင်သော ကြောင့် မြန်မာတို့၏ ချစ်စရာ ပျော်စရာ လတစ်လပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
Posted by friend group at 2:13 PM0comments
ပြော ပြတာကို နားဆင်ပါ
ညီမလေး. . . ရှောင်ဖို့ပါ . . .
ထာဝရ ဆောင်ထားပါ . . .
အလှပျက်မှာ ဆိုးလို့ပါ . . .
အသိနှင့်သတိ အမြဲရှိ အဟုတ်မှန်လိမ့်မယ်
ယနေ့ ယခု ဒီအချိန်မှစ
Posted by friend group at 11:22 AM0comments
တိမ်တွေလို မျော်လွင့်နေတဲ့ အတွေးတွေထဲမှာ
Posted by friend group at 4:22 PM0comments
Posted by friend group at 4:17 PM0comments
အချစ်မှာ အချိန်၊ အကွာအဝေး၊ နေရာဒေသ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ ကန့်သတ်မှု မရှိပါဘူး . . .။
(၅)နှစ် အရွယ်တုန်းက - ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ နင် ခေါင်းကို ငဲ့ပြီး မျက်လုံးဝိုင်းလေးကို ပုတ်ခတ်ရင်း အဲဒါ ဘာအဓိပ္ပါယ်လည်းလို့ ငါ့ကို မေးခဲ့တယ်။
(၁၅)နှစ် အရွယ်တုန်းက - ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အင်္ကျီအနားစကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့ လုံးချေကစားရင်း ခေါင်းလေးကို ငုံ့လို့ ရှက်သွေးတွေ ဖြာပြီး နင်ပြုံးနေခဲ့တယ်။
(၂၀)နှစ် အရွယ်တုန်းက - ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ငါ့ပုခုံးထက်မှာ ခေါင်းကလေးကိုမှီပြီး ငါပျောက်ကွယ်သွားမှာ စိုးတဲ့အလား ငါ့လက်မောင်းကို နင် တင်းတင်းလေး ဖက်ထားခဲ့တယ်။
(၂၅)နှစ် အရွယ်တုန်းက - ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ မနက်စာကို ပြင်ဆင်ရင်း ငါ့နဖူးကို တစ်ချက်နမ်းပြီး ``သိပါတယ် . . . ထပါတော့ လူပျင်းလေးရယ်´´လို့ ချစ်စနိုးနဲ့ နင်ပြောခဲ့တယ်။
(၃၀)နှစ် အရွယ်တုန်းက - ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ``တကယ်ချစ်ရင် ရုံးဆင်းချိန် လျှောက်မလည်နဲ့၊ မှာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ၀ယ်ခဲ့ဖို့ မမေ့နဲ့´´လို့ နင်ရယ်ပြီး ပြောခဲ့တယ်။
(၄၀)နှစ် အရွယ်တုန်းက - ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ပန်းကန်တွေ သိမ်းရင်း ``ကောင်းပါပြီ . . . ကလေးတွေကို စာပြလိုက်ပါဦး´´လို့ နင် စိတ်မရှည်စွာ ပြောခဲ့တယ်။
(၅၀) အရွယ်တုန်းက - ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ သိုးမွှေးချည်ထိုးရင်း ``တကယ်လား . . . နင့်စိတ်ထဲမှာ ငါ့ကို စောစော သေစေချင်နေတယ် မဟုတ်လား´´လို့ ပြောပြီး တခစ်ခစ်နဲ့ နင်ရယ်ခဲ့တယ်။
(၆၀) အရွယ်တုန်းက - ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ငါ့လက်မောင်းကို တစ်ချက်ထုရင်း ``အဘိုးကြီး . . . မြေးတွေတောင် ကြီးနေပြီ အပြောက မက်တုန်း´´လို့ ပြောခဲ့တယ်။
(၇၀) အရွယ်တုန်းက - မျက်မှန် ထူထူကိုတပ် ငါတို့ခုံပေါ်မှာ အတူတူထိုင်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် (၅၀)က ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်နေခဲ့တယ်။ နင့်ရဲ့ တွန့်ကြေနေတဲ့ လက်ကို ငါဆုပ်ကိုင်ရင်း ငါနင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အကြင်နာတွေ ပြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ နင်ငါ့ကို ကြည့်နေခဲ့တယ်။ အရစ်ကြောင်းတွေနဲ့ တွန့်ကြေနေပေမယ့် နင့်မျက်နှာဟာ လှပနေဆဲပါ။
(၈၀) အရွယ်တုန်းက - ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ နင် လှဲလျောင်းနေတယ် . . . ငါ ငိုနေတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခွန်း နင်ပြောခဲ့တယ်။ ``ငါ . . . နင့် . . . ကို . . . ချစ် . . . တယ်´´
ငါ့ဘ၀မှာ အပျော်ဆုံးနဲ့ ၀မ်းအနည်းဆုံး နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။
အချစ်စစ်ဟာ အချိန်ကို ကျော်ဖြတ်တယ်။
အချစ်စစ်ဟာ အကွာအဝေးကို ကျော်ဖြတ်တယ်။
မြတ်နိုးတတ်ဖို့နဲ့ နားလည်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ် . . . ။
ပန်သစ္စာဂျာနယ်မှ ´ကောင်းလွန်း´ မျှဝေသော Email မှ စာစုလေးအား ပြန်လည် မျှဝေပါသည်။
Posted by friend group at 10:38 AM0comments
အချစ်ဆိုတာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ထာဝရ လိုအပ်နေခြင်းပါ။ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေခြင်းပါ။ ချစ်သူ နှစ်ဦးဟာ တစ်ဦးရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တစ်ဦးက ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ အပြည့် ရှိနေပါတယ်။ တစ်ဦးရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို တစ်ဦးက နားလည် သိရှိနေခြင်းဟာလည်း အချစ်ပါပဲ။ အချစ်မှာ ယောင်္ကျားလေးတွေက ကြိုးစားပိုင်ခွင့် ရှိပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ မျှော်လင့်ခွင့်ပဲ ရှိပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ (ဖြူစင်တဲ့) အချစ်ဆိုတာ ရယူလိုခြင်း မရှိပဲ ချစ်ရုံချစ်နေခြင်းပါပဲ။ အမြဲတမ်း တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး နားလည်ပြီး စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ အချစ်တွေ နက်ရှိုင်းလာတဲ့အခါမှာ မေတ္တာဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီမေတ္တာကို အနက်ရှိုင်းဆုံး အချစ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဖြူစင်ဆုံး အချစ်စစ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမေတ္တာဟာ သူတို့နှစ်ဦးနဲ့ပဲ ပတ်သက်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မပျက်ပြယ်တော့မယ့် မေတ္တာပါပဲ။ လောကမှာ နားလည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မေတ္တာကို သူနားလည်လာတဲ့ အချိန်မှာ မေတ္တာရောင်ပြန် အဖြစ် မေတ္တာ ပြန်ပေးတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အရင်က လိုချင်ခဲ့တဲ့ အချစ်က အရူးအမူးအချစ်ပါ။ အခုအချိန်မှာတော့ တစ်ဦးကို တစ်ဦး နားလည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ မေတ္တာတရား (အချစ်)ကိုပဲ လိုချင်မိနေပါတယ်။ အရူးအမူး အချစ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော သူများကိုပါ ပူလောင်စေပါတယ်။ နားလည်မှု အချစ်ကတော့ ကိုယ်အေးချမ်းသလို သူများကိုလည်း အေးချမ်းစေပါတယ်။ အေးချမ်းစေချင်တဲ့ ဆန္ဒလည်း အပြည့်အ၀ ပါဝင်ပါတယ်။
အချစ်ကို အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ဖွင့်ဆိုကြပေမယ့် အချစ်ရဲ့ သဘောမှာ ကိုယ်ချစ်ရသူကို စောင့်ရှောက်ရင်း သူ့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း အတူတူ နေလိုခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အချစ်ကို ဘယ်လိုမှ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာ ရင်ထဲက အလိုလို ဖြစ်လာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အလိုလို ပေါက်ဖွားလာမှုကို ဘယ်အရာနဲ့မှ ဖျက်ဆီးလို့ မရပါဘူး။ တားဆီးလို့လည်း မရပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းမှပဲ ရပါတယ်။ ကိုယ်က ချစ်ပေမယ့် ပိုင်ရှင်ရှိပြီးသားမို့ လက်လျှော့ပြီး အဝေးကနေ ချစ်နေကြရသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် ရင်နာရသူတွေ၊ အချစ်ကြောင့် ဘ၀ပျက်ကြသူတွေ၊ အချစ်ကြောင့် ရူးသွပ်ခဲ့ရသူတွေ ရှိသလို အချစ်ကြောင့် ပျော်ရွှင် ကြည်နူးရသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပါစေ အချစ်ကို ဘယ်သူမှ ရှောင်ရှားလို့ မရပါဘူး။ အသက်အရွယ်မရွေး ၀င်လာနိုင်တာမို့ သတိနဲ့ ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း ချစ်သင့်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ အချစ်နဲ့ တွေ့သူတွေ၊ အိမ်ထောင်ရှိသူများကို ချစ်မိသူတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ချစ်မိတဲ့ အချစ်ကို အပြစ်မတင်လိုပေမယ့် ကိုယ့်အချစ်ကို ထုတ်ဖော်လိုက်တာကိုတော့ အပြစ်တင်လိုပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အရ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်အရ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်မှုတွေ ရှိလို့ပါ။ အဲဒီလို အချစ်မျိုးကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကို ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ပြောရရင် လူ့ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်သူ၊ သစ္စာမရှိသူအဖြစ် တစ်သက်တာ အပြစ်သား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် နားလည်ထားတဲ့ အချစ်ဆိုတာ တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အပြန်အလှန် ပေးဆပ်လိုမှုများနဲ့ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ယုံကြည်စွာနဲ့ ချစ်ခြင်းလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ချစ်သောသူတိုင်း ပေါင်းဖက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း . . .
Posted by friend group at 1:27 PM 1 comments
သူငယ်ချင်းဆိုတာ စစ်မှန်တဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေ၊ ဟန်ဆောင်မှု မပါတဲ့ ခင်မင်မှုတွေနဲ့ ခိုင်မြဲစွာ လက်တွဲထားကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာကို အနွံတာခံ၊ အနစ်နာခံပြီး တစ်ဦးကို တစ်ဦး ဖေးမ ကူညီ ရိုင်းပင်းကြတဲ့ စိတ်ရင်းများ ရှိကြပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်လေးဟာ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အတွေးလေးတွေကို စုစည်းတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းများ ဘလော့ဂ်အား
http://www.friendgroup04.co.cc များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းများ၏ ဘလော့ဂ်အား လာရောက် ကြည့်ရှုသူများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဝေဖန် အကြံပြုနိုင်ပါသည်။
အချစ်၊ အမုန်း (10)
ရေးမိတာလေးများ March (1) February (4) January (1) December (14) November (20) October (18) September (7) August (18) July (6) June (4) May (30) April (5) March (12) February (9)
သူငယ်ချင်းများ မောင်စေတနာ ကိုညီလင်းဆက် ကဗျာ ကိုရဲမြင့် ဒီကောင်လေး မိုးကောင်းကင် ကိုမောင်လှ သူငယ်ချင်းမေဇင် ဒီကောင်လေး တွယ်ရာမဲ့
Myanmar Popular Models
online မှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ကြည့်နေလဲ